Kulamo Madaxeed aan Qayb Ka Ahaa |
Intii aan madaxtooyada joogay, waxa ii suuragalay in aan qayb ka noqdo kulamo dhex maray madaxda Somaliland iyo madaxda dalal badan oo caalamka ah. Halkan baan ku soo gudbinayaa kulamadaas iyo wixii iiga baxay.
Kulankii Madaxweyne Geelle
Waxay ahayd Nov|3|2010 markii madaxweyne Silanyo safarkii ugu horreeyay ee uu debadda ugu baxo booqasho rasmi ahna ugu kicitimay Jamhuuriyadda Jabuuti markii uu casuumad ka helay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, waxaanan ka mid ahaa weftigii madaxweynaha.
Weftigii Madaxweyne Geele iyo Weftigii Maamulka Somaliland
Safarkaasi wuxuu hordhac u aha xidhiidh cusub oo diblomasiyadeed oo ay yeeshaan xukuumadda Somaliland iyo Jabuuti, ka dib markii uu xidhiidhka labada dal hoos u dhacay sannadkii 2007, markii ay waxoogaa shaki ahi ka dhashay dhoofinta xoolaha Soomaalida, isla markaana dekedda Jabuuti ay noqoto meesha laga dhoofiyo xoolaha Soomaalida.
Markii ay madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisu gaadheen madaarka Jabuuti, waxa garoonka ku soo dhoweeyay madaxweynaha Jabuuti, isla markaana waxa loo dhigay roogga cas ee lagu soo dhoweeyo hoggaamiyayaasha.
Madaxweyne Geelle waxa uu muddo dheer ku soo shaqeeyay Chief Of Cabnet, mansabkii aan mid la mid ah Somaliland kaga soo shaqeeyay. Waqtigaasi aqoon badan umaan lahayn war guud mooyaane, waxaanan u haystay inuu ahaa nin meesha lagu wareejiyay. Waxaan ogaaday inuu ahaa nin soo shaqeeyay oo soo kifaaxay, oo maamul ahaan madaxtooyada waddankiisa ka soo shaqeeyay, xogo badan haya, wax badanna kala og. Kulankaa waxaan ka xusuustaa, waxa uu naga waraystay arrimaha dhaqaalaha Somaliland. Ka dibna waxa uu nagu yidhi “Haddii aydaan cashuurta sida ay tahay bulshada uga ururin, dalka maamuli kari maysaan.” Waxa uu na weydiiyay “Imisa qof ayaa Somaliland telefoonka gacanta sita?” Waxa aannu ku nidhi. “qiyaastii nus malyuun qof ayaa telefoonka gacanta sita.”
Inta uu qoslay ayuu yidhi. “Waxaad tihiin qani! Annaga waxa Telefoonka gacanta sita konton kun oo qof oo kaliya, miisaaniyaddayadana dakhli aad u badan ayay ka yihiin.”
Wuxuu yidhi “Waxaad ka faa’idaysan kartaan cashuuraha laga qaado telefoonnada, lacagaha adag iyo diyaaradaha.” Run ahaantii waxaan dareemay in uu xogo badan ka hoyo Somaliland, waxaana ka muuqatay khibrad iyo waayo-aragnimo. Waxa uu tilmaamay dhawr meelood oo maskaxdayda ku sawiran.Arrimahani waxay noo noqon karayeen mafaatiix wanaagsan oo aannu ku kobcin karno dhaqaalaha dalkayaga. Waxa kale oo iyaduna fursad noo ahayd in wasiir walba lagu xidhay inay is xogwaraystaan wasiirka dhiggiisa ah, isla markaana xogta maamulka dawladnimo isweydaarsadaan. Markaa waxaan fursad u helay inaan la kulmo wasiirkii maaliyadda ee Jabuuti ee xilligaa oo magaciisa la odhan jirey Cali Cadnaan. Kulamadii aannu la yeelannay wasiirrada fikrado badan oo aannu ka faa’idaysannay ayaannu ka soo kasbannay.
In kasta oo si aad u heer sarraysa oo karmaao iyo maamuus huwan na loo soo dhaweeyay oo madaxweyne Geelle uu madaxweyne Silanyo ku qaabbilay diyaaradda hoosteeda, isla markaana aannu fekrado ka faa’idaysannay, haddana qodobkii bulshadu aadka nooga sugaysay ee aqoonsiga Somaliland iyo Ictiraafka dawladnimadeeda wax jawaab ah oo sugan kamaannu helin. Waxaa na sugaayay qabyo ballaadhan oo dhinaca dhismaha iyo horumarinta qaranka ku wajahan, gaar ahaan waxaa i sugaysay shaqo badan oo ay ka mid tahay qaabkii maamulka iyo qorshihii shaqaalaha kala duwan ee ka hawl gala xarunta madaxtooyada oo aan maalinba wax ka qabanayey ama wax ku soo darayay. Habraaca iyo isbeddelka nidaamka shaqo ayaannu xoogga saarnay. Sideedaba, guusha iyo guuldarrada maamul waxaa lafdhabar u ah kolba siday kooxdu (team) isula jaanqaadaan ee ay u wada hannaaniyaan.
Annagoo shaqaalihii hore soo dhoweyn iyo iskaashi la samaynaya (Coaching), waxaan soo xulnay oo aannu shaqaalaysiinay koox dhallinyaro ah oo aqoonyahanno ah oo leh kartidii iyo hufnaantii ay ku gudan lahaayeen hawlaha xagga maamulka iyo maaraynta ah iyo waajibaadka kala duwan ee ka jira xarunta madaxtooyada. Dhallinyaradaa aqoonyahanka ahaa oo run ahaantii aan odhan karo waxay ahaayeen tiirarka iyo taageerada kala socodsiinayey hawlaha xarunta madaxtooyada; waxaa ka mid ahaa xoghayayaasha, agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada, xoghayaha golaha wasiirrada, agaasima-waaxeedyada, shaqaalaha, maamulka, dhaqaalaha, iyo xafiisyada xidhiidhka iyo arrimaha bulshada.Sida runta ah, kooxda dhallinyarada ahi waxay ahaayeen badankoodu kuwo tayo leh oo aad u fiican, waxayna nagala soo dabbaasheen bad iyo baaxadsoore. Waxaan aaminsanahay in iyaga la’aantood aanay wax badani noo qabsoomeen. Hawlkarnimadii iyo xilkasnimadii ay la yimaaddeenna waxay ka qayb qaadatay habsami u socodkii shaqo. Habmaamuusku (protocal) waa tiirarka dawladnimada, balse dadka Soomaalidu waxba u ma yaqaannaan.
Waxay dhaqan ahaan yaqaannaan oo ay tixgeliyaan ixtiraamka iyo dhaqanka. Waxaa xaqiiqo ah dawladi haddii aanay lahayn habmaamuus, amaba aan si dhab ah ugu dhaqmin, arrinteedu waxay noqonaysaa uun habqan iyo isdhexyaac, taasna waxaa ku luma milgihii iyo meeqaamkii uu qaranku lahaa! Sidaa darteed, waxaannu aad isugu hawlnay in shaqada iyo hawlmaalmeedka wasaaradda madaxtooyada aannu u samayno nidaam iyo habraac (policy & procedures) qoran oo si dhab ah loo tixraaco, xilli kasta iyo xaalad kastaba. Maadaama oo gaadiidkii aannu la wareegnay uu ahaa duug muddo soo shaqaynayay, maalin maalmaha ka mid ah ayuuba naga istaagay gaadhigii madaxweynuhu!
Waaxda habmaamuuska ee waddamada dunidu waxay caan ku yihiin oo ay leeyihiin gaadiid u gaar ah (sida baabuur madmadaw iyo mootooyin) oo lagu qaado ama lagu gelbiyo hoggaanka qaranka iyo madaxda kale ee dalka. Gaadiidkaasi waxay leeyihiin dhammaanba aaladihii iyo qalabkii (sida dhawaqa, laydhadhka saddexda midab leh iyo qalabkii isgaadhsiinta) lagamamaarmaanka u ahaa hagitaanka iyo gelbinta socodka iyo safarrada hoggaanka sare ee qaranka iyo madaxda kale ee dalka.
Waxaannu samaynay xeer-nidaamiyeyaal iyo habraac khuseeya shaqooyinka kala duwan ee wasaaradda iyo madaxtoodayada sida: habmaamuuska guud, habmaamuus u gaar ah golaha wasiirrada. Sidoo kale xagga maamulka iyo lacagta, xagga shaqaalaha (HR) iyo gaadiidka. Annagoo dhammaan u samaynay diiwaanno kala duwan oo qoran, habraac iyo xeerhoosaadyo (manuals and procedures) kuwaas oo ay si cad ugu qeexan yihiin nuxurka iyo ujeeddooyinka ay ka tarjumayeen. Guud ahaanba hay’adaha uu qaranku ka kooban yahay (Sharci dejinta, Garsoorka iyo Fulinta) waxay ku dhisan yihiin ee kala hagaa waa Distoorka qaranka. Haddaba, marka la eego xagga shuruucda iyo xeerarka, waxaannu samaynay daraasaad aannu ugu kuurgelaynay meelaha loo baahan yahay ama ay lagama maarmaanka tahay in la curiyo xeerar cusub, ama kuwii hore u jiray wax-ka-beddel iyo kaabisba lagu sameeyo.Daraasaadkii iyo xog-ururintii aannu samaynay waxaa nooga soo baxay in loo baahan yahay in la curiyo xeerar badan. Waxa aannu samaynay xeerar badan oo uu ugu mihiimsanaa xeerkii kala hagi lahaa ama kala nidaamin lahaa hay’adaha kala duwan ee ay xukuumaddu ka kooban tahay, xeerkaas oo la yidhaahdo: ‘Xeer-nidaamiyaha xukuumadda’ (Goverment Organization Act). Xukuumadda oo ah hay’ad leh awood fulineed, waxa lagama maarmaan ah inay yeelato xeerar iyo nidaam kala wada oo aan keliya ahayn hadal ama af, balse ah sharci iyo xeerar si dhab ah loogu dhaqmo. Ugu dambayntiina waxaannu u gudbinnay golaha wakiillada, si ay u ansixiyaan.
In kasta oo aannu ku dedaalnay in aan saxno ama hagaajinno xeerarka iyo habmaamuuska dawladnimo, haddana caqabad waxa nagu ahaa dhaqanka iyo habnololeedka dadka oo aan waxyaalaha qaar noo saamixin.
Nabadgelyada iyo degenaanshuhu waa tiirka ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan tahay nolosha iyo jiritaanka ummadnimo. Ciidamada kala duwan ayaa ka mid ah halbawlayaasha waaweryn ee qarankan Somaliland ku dhisan yahay. Si gaar ahna ilaalinta iyo sugidda amniga qarsigu wuxuu ahaa masuuliyadihii madaxweynihu ii xilsaaray ka war haynteeda. Ciidamada Ilaalada Madaxtooyadu waxay lafdhabar u ahaayeen sugitaanka amniga xarunta madaxtooyada iyo hoggaanka qarankaba. Ciidamada Ilaalada waxaannu shirkadda Toyota uga dalabnay tiro baabuurro ah oo cusub. Sugitaanka amniga xarunta madaxtooyada keliya intaa kumaannu daynin ee waxa aannu gudaha iyo dibeddaba ku xidhnay security camers oo 24-ka saacadoodba shaqaynaya, oo lagala socon karo wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah. Marka la eego xagga siyaasadda, wasaaradda madaxtooyadu waa xafiiskii madaxweynaha u soo diyaarinayey qorshayaasha, warbixinnada, xidhiidhka iyo xogaha siyaasadeed ee dhan walba ah ee uu madaxweynahu la leeyahay dhammaanba hay’adaha iyo laamaha ay xukuumaddiisu ka kooban tahay. Waxaannu ku dedaalnay in haatan ay wasaaradda madaxtooyadu noqoto xafiis nool, firfircoon oo si dhab ah uga soo baxa hawlaha uu qaranka u hayo.
Sida oo kale waxaan diyaarin jiray badi khudbadaha madaxweynaha. Madaxweynaha ama hoggaamiyaha ummadi dooratay wuxuu leeyahay haybadda qaranka ugu sarraysa. Waxaa u dhegtaagaya hadalkiisa dadkiisa iyo dunida kale ee danuhu ka dhexeeyaan. Sidaa darteed sax ma aha in uu inta uu isa soo taago wuxuu doono iskaga hadlo. Mana aha meel aftahamada qofka lagu tijaabiyo ee waa meel xikmadda iyo hoggaaminta qofka laga eego. Waxaana muhiim ah khudbad qoran ama uu qaybsan yahay oo aan dhacdhac lahayn in uu jeediyo. Waxay ahayd arrimaha iigu werwerka badan diyaarinta khudbadaha madaxweynahu. Badanaa marka aan diyaarinayo waxaan ku diyaarin jiray meel gaar ah, ka dibna waxaan la wadaagi jiray ciddii aan madaxweynaha isla garanno ee wax ku soo kordhinaysa ama wax kaa saxaysa. In kasta oo iskaashigu uu wanaagsan yahay, haddana dadku hadalka isku si uma wada dhadhamiyo. Markaa waxaa muhiim ii ahayd in aan la kaashada dadka aqoonyahanka ah ama af Soomaaliga aftahanka ku ah. Marmarka qaarna waxaa loo baahdaa sharciyaqaan nagala taliya wixii arrimaha sharciga khuseeya.
Khudbaduhu way kala duwanaadaan. Way kala dhaadheer yihiin. Waxyaalaha ay ka hadlayaan way kala duwan yihiin. In kasta oo ay jiraan hannaan iyo xirfado u gaar ah khudbadaha, waxaa muhiim ah in khudbaddu ku wajahan tahay dadka lala hadlayo, isla markaana aad tixgeliso ilaalinta mawduuca laga hadlayo iyo iskuxidhnaantiisa; iyadoo mararka qaarna qalbiga iyo caadifadda dadka lala hadlaayo mararna maskaxda iyo garaadka wax la dhacsiinayo. Waana waxa keena in marna dadka laga qosliyo marna laga qiiraysiiyo. Dheeraanteeda iyo gaabnaanteedu waxay ku xidhan yihiin hadba inta aad mawduuca ugu gudbin karto dhegaystaha iwm.
Muhiimad weyn ayay leeyihiin khudbaduhu, waana meesha hoggaamiyuhu farriintiisa ugu muhiimsan ku gudbiyo. Waxaan xasuustayda ka bixin khudbaddii madaxweynaha ee sannadkii 2012. Xilligaa waxaa na la soo dersay dhawr arrimood oo lahaa culays siyaasadeed. Waxaa ka mid ahaa Soomaaliya oo dawladda Maraykanku ictiraaftay, arrintaas oo ahayd arrin Somaliland indhihii caalamka ka jeedisay; Dawladda Ingiriiska oo soo saartay digniin nabadgelyo oo Somaliland liddi ku ah, taas oo sababtay in shirkadihii baadhayey shidaalka iyo dhammaan dadkii ajinebiga ahaa ee dalka ka shaqaynayey ay naga baxaan, waxaa xanuun gaar ah lahayd markii dhakhaatiirtii cusbataalka Maxamed Aadan Sheekh oo ku hawlanaa arrimo caafimaad oo xaasaasi ah ay nagu wargeliyeen in ay ka baxayaan dalka. Arrimahan iyo qaar kale oo badan waxay ay taabanayeen dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada dalka, dhaqaalaha, iyo arrimaha bulshada intaba. Waxaa taagnaa wakhtigii khudbad sannadeedkii madaxweynaha ee labada gole. Waxaan madaxweynaha isla garannay in aan diyaariyo khudbad arrimahan ka jawaabayso, isla markaana siyaasad ahaan bulshada kalsoonidooda soo celinaysa, beesha caalamkana farriin muhiim ah u diraysa. Sidoo kale waxaannu qorshaynay muddaharaad abaabulan oo bulshadu ku taageerayso qarannimadeeda oo gobollada oo dhan laga sameeyo.
Maadaama oo arrimaha aannu khudbadda kaga jawaabaynay ay ka mid ahayd xaaladda amaanka dalka ee hoos loo dhigay, waxaan qorsheeyay marka khudbaddu dhammaato in madaxweynuhu golaha ka lugeeyo ilaa suuqa intii uu gaadhi karo, isaga oo golayaasha iyo bulshadaba hor kacaya, oo uu dunida tuso in dalkiisu nabad yahay. Markii aan fekraddii soo bandhigay waxaa ka biya diiday wasiirkii daakhiliga ee xilligaa mudane Duur oo ku cilleeyay in ay ku jirto khatar weyni arrintaa, isagoo si adag uga hor yimi. Dadkii kale ee markaa meesha na la joogayna way ku raaceen, balse waxaan mar labaad isku deyey in aan sharraxaad dheeraad ah ka bixiyo ujeeddada. Madaxweyne iyo mudanayaal, waxaad ogtihiin in dalkeenna dhaawac weyni ka soo gaadhay arrinta amaanka, iyada oo ay shalay innaga dareereen dhakhaatiirtii ajnebiga ahaa oo ugu danbeeyey. Markan oo kale waxay u baahan tahay in aan khatar kasta nafaheenna u gelinno si qarankani u badbaado madaxweynaha iyo wasiiradeennu waxaynu nahay hoggaanka ummaddu sugayso ee ku dayanayso, ee loogu talagalay in aynu khatar kasta kala dabbaalanno. Haddii aynaan khatarta innagu isu dhigin, sidee dalku uga badbaadayaa duruufta adag soo food saartay.
Madaxweynihii ayaa hadalkii qaatay oo yidhi, waxaan ku raacsanahay Xirsi in aynu khatar kasta oo ay leedahay u badheedhno. Naftaydu maalin bay leedahay, qaranku aniga ayuu i doortay, khatar kastana diyaar ayaan u ahay in aan wajaho. Waynu lugaynaynaa, anigaana hor kacay muddaharaadka. Waa la aamusay, dabadeedna waxaannu u dareernay golihii wakiillada.
Waxaannu galnay golihii wakiillada. Madaxweynuhu wuxuu gudagalay khudbaddiisii oo ilaa 27 bog ka koobnayd. Wuxuu golaha warbixin ka siiyay sannadkii la soo dhaafay, isaga oo ka warramay qorshihiisa sannadka cusub, isla markaana diiradda saaray arrimo badan oo ay ka mid yihiin: nabadgelyada, waxsoosaarka, caddaaladda, biyaha, waxbarashada, dhaqaalaha, miisaaniyadda qaranka, dhismayaasha dawladda, waddooyinka, madaarrada, warbaahinta, shaqa-abuurka, doorashooyinka iyo siyaasadda arrimaha debadda. Isaga oo arrimahaa qaarkood ka hadlayana wuxuu yidhi:
“Dawladda cusub ee Soomaaliya waxaa inoo dhexeeya cilaaqaad fiican, dalkan Somalilandna dawlad uma aha, mana xukunto. Waa taynu dawladnimadeennii dib ula soo noqonnay. Maanta waxaynu ku hawlannahay aqoonsi aynu ka helno dunida. Dawladda Soomaaliya iyo dadkeedana waxaynu ka rejaynaynaa in ay garwaaqsadaan in aynu u tashannay masiirkii ummaddeenna, xaqna u leennahay. Mana jirto cid ina khasbi kartaa. Ictiraafka Maraykanku siiyay Soomaaliya ma aha wax Somaliland khuseeya mana aha wax cusub ee weligeedba dawladda Maraykan way ictiraafsanayd Soomaaliya, balse waxay iminka aqoonsadeen maamulkan cusub. Annaguna kama xumin xasadna kuma nihin in dadka Soomaalidu nabadgelyo iyo horumar gaadhaan iyo inay wax dhistaan toona.
Xidhiidhka Somaliland iyo dawladda Maraykanka waxba iskama beddelin, waxaana kuu caddaynaya farriintan oo ay wasaaradda arrimaha debaddu u soo dirtay wakiilkeenna Maraykanka, Rashiid Gaaruf taas oo u dhignayd sidan: “Rashid – Not to worry. U.S. recognition of the government of Somalia will not prevent the U.S. government from engaging in Somaliland nor prevent us from conducting our programs in Somaliland. We made sure to clarify this with the Somali government before deciding to recognize them. We want to ensure that stability is maintained where it currently exists, and support expanding it where it doesn’t.”
“Walaalayaal, baahida ugu weyn iyo shayga ugu muhiimsan ee qarankan Somaliland ku naaloonayaa waa madax-bannaani iyo ictiraaf uu ka helo dunida. Waxaynu soo samaynay dedaal badan iyo dhabara-dayg aynu 21 sannadood ku raadinaynay qaddiyaddeenna ummadnimo. Waxaana marag-madoon ah in wax weyni inoo qabsoomay, meel fiicanna aynu joogno. Balse waa himilo iyo masiir ummadeed oo inooga baahan in aynu tacab badan gelinno, dedaalkeenna labalaabno, gacmaha isqabsanno oo si wadajir ah uga wada shaqayno xukuumad, golayaal iyo xisbiyada mucaarad iyo muxaafidba.
“Wax kasta oo qaali ah waxaa lagu gaadhaa qiimo badan iyo wax qaali ah. Ummaddani waxay madaxbannaani iyo gobonnimo ku gaadhaysaa iyadoo loo guntada, iyadoo garasho sax ah lagu baadi doono, iyadoo loo fahmo madaxbannaanidu in ay tahay masiir ummadeed oo cid kasta xil iyo masuuliyadi ka saaran tahay. Ma aha wax maalin iyo habeenkeed meel laga soo qaadayo. Ma aha wax xukuumaddu iska leedahay, waa se shaqo loo igmaday. Ma aha meel aad mucaaradnimo ka daydo ama aad istidhaahdo cid ku xumee, ee waa qarannimadii oo xil baa kaa saaran qof kastowba.
“Madaxweyne ahaan intii aan xafiiska joogay, waxaan qaaday tallaabooyin badan. Waxaan garaacay albaabbo badan. Waxaana iga go’an in aan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulo sidii aan dalkan aqoonsi iyo madaxbannaani u gaadhsiin lahaa. Si aan yoolkaa u xaqiijiya, cid kasta waxaan diyaar u ahay in aan hor fadhiisto. Tallaabo kasta oo arrintaa lagu gaadhi karana waxaan diyaar u ahay in aan qaado. Waxaanan ogsoonahay in xilka koowaad aniga iga saaran yahay, balse ictiraafku ma aha wax aniga gacantayda ku jira ee waa wax gacan kale innagaga xidhan. Qarankan waxaan u soo maray halgan dheer, waxaan u soo sabray wakhti dheer, waxaan u dhaartay dantiisa, waxaanan u hurayaa wax kasta oo suurtagal ah. Waxaan idin waydiisanayaa taageeradiina waxa aanad ku kalsoonaataan in aan qofna iga jeclayn in dalkan iyo dadkiisu wax noqdaan.”
Mar kalana madaxweynuhu isag oo dadkiisa dhiirrigelinaya wuxuu ku yidhi “Maanta Somaliland loo werweri maayo. Marxalado badan ayay soo martay oo fulaygu shakiyey. Sidaan horaba u sheegay, boqol sannadood hadday gaadhayso madaxbannaanida Somaliland waa muqaddas. Waxaanan ku kalsoonahay in aan si wadajir ah uga gudbi doonno caqabad kasta oo innaga hor timaadda”
Khudbaddii iyo bannaanbixii madaxweynuhu hor kacayey iyo bannaanbaxyada kala duwanaa ee dalka ka dhacayey waxay abuureen jawi cusub oo dadkii yididdiilo geliyey, soona nooleeyay rejadii shacabka. Isla markaana wuxuu noqday farriin ay Somaliland dunida gaadhsiisay. Markii nabadgelyo lagu soo guryo noqday waxaa iga hadhay culays weyn iyo werwerkii i saarnaa. Waxaana noo soo hoyatay guul weyn. Anigana waxay ii ahayd si gaar ah guul aad u weyn, maadaama oo khatartii aan ku taliyey in la qaato lagu badbaaday. Waxaanay noqotay arrin dhammaan la mahadiyey.
Dhinaca kale, waxaannu abuurnay xafiiskii xidhiidhka saxaafadda oo ay shaqadiisu tahay inuu faafiyo wararka iyo macluumaadka ay Madaxtooyadu doonayso inay baahiso, sidoo kalena soo ogaado oo ka talo bixiya wixii warar ah ama dacaayado ah ee xukuumadda laga faafiyo, iyo Wargeys bille ah oo la yidhaahdo RAAD RAAC oo ka war bixiya hadafka, himilooyinka iyo talaaboyinka ay xukuumaddu qaaddo (xag siyaasadeed, xag dhaqaale, iyo xagga horumarka bulshadaba). Dhacdooyinkii siyaasadda ee xusidda mudnaa waxaa ka mid ahaa furitaanka ururrada siyaasadda, oo run ahaantii aan odhan karo waxay ahayd dhacdo siyaasi ah oo xasaasi ah oo saamaynteeda lahayd, isla markaana ay ka dhalatay hirdan siyaasadeed iyo fursad dimuqraaddiyadeed oo jaanis siinaysa in muwaadiniintu u tartamaan ururradii siyaasadda ee u gudbi lahaa xisbiyo qaran oo ka qayb qaata siyaasadda dalka.
Haddaba, markii madaxweynuhu go’aansaday in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu furi doono ururrada siyaasadda, maadaama arrintii furitaanka ururrada siyaasaddu ay xasaasi ahayd, wasiir ahaan hawsha ugu muhiimsan ee i hortaallay waxay ahayd inaan madaxweynaha u soo qorsheeyo oo aan soo qaabeeyo sidii arrintaa siyaasadeed ee jaahwareerka dhalin karta loogu beddeli lahaa fikir iyo aragti macquul ah oo la aqbali karo, si aanay bulshadu uga biyo-diidin. Waxay wada shaqayn toos ahi naga dhaxaysay guddidii uu madaxweynuhu u xilsaaray inay ka soo talo-bixiyaan arrinta khusaysa furitaanka ururrada siyaasadda. Furitaanka ururrada siyaasadda waxa la odhan karaa laba arrimood ayuu madaxweynuhu u cuskaday ama uu saldhig uga dhigay:
Xilligii uu madaxweynuhu ku jiray ololihii doorashada, ballanqaadyadiisii ayay ka mid ahayd inuu furi doono ururrada siyaasadda.
Madaxweynuhu wuxuu furista ururrada siyaasadda shuruud uga dhigay inaan la iska furin, balse marka hore talo qaran laga yeesho, isla markaana bulshada la weydiiyo fikirka iyo aragtida ay ka qabaan furista ururrada iyo inay jirto baahi ay bulshadu u qabto arrintaa.
Arrinta khusaysa furitaanka ururrada siyaasaddu waxay ahayd dhacdo siyaasadeed oo u baahan in si deggen oo qoto dheer loo waajaho. Waxaa la isla qaatay in bulshada talo la weydiiyo, oo haddii ay bulshadu u badato ha la furana in ururradii la furo, haddii ay yidhaahdaan yaan la furina la iska daayo furistooda. Waxaannu kala shaqaynay guddigii loo xil saaray sidii aannu ugu abaabuli lahayn dhammaan gobollada dalka in wadatashi lala yeesho haldoorkii iyo waxgaradkii bulshada ugu mudnaa sida culimada, aqoonyahannada, indheergaradka, salaadiinta iyo cuqaasha, haweenka, ururrada bulshada iyo cid kasta oo wax-aqoon lagu tuhmayey. Wada tashigii bulshada lala yeeshay iyo xog-ururintii ka soo baxday waxay ku soo ururtay, bulshadii oo tidhi ha la furo ururradii siyaasadda, taas oo waafaqaysay ballanqaadyadii madaxweynaha. Waxay ahayd arin xaasaasi ah oo xitaa uu xisbigii xukuumadda ee aannu ka tirsanayn ka soo hor jeeday, una baahnayd in la is waafajiyo rabitaanka bulshada ee furista ururrada, ballanqaadkii madaxweynaha iyo aragtidii ka soo horjeedday ee xisbiyadii hore u jiray.
Waxaa tartankii ururrada isugu soo hadhay toddobo Xisbi/Urur: Kulmiye iyo Uicid oo xisbiyadii hore ahaa, iyo shan urur siyaasadeed oo cusbaa, kuwaas oo u tartamay saddexdii u gudbi lahaa xisbiyo qaran oo tobanka sannadood ee soo socda ka qayb qaadanayay tartannada siyaasadeed ee madaxtinnimada dalka ee hay’adaha kala duwan (Madaxtooyada, Baarlamaanka iyo Dawladaha hoose). Waxaana xisbiyo qaran u gudbay Kulmiye, Waddani iyo Ucid. Sida tartanka u caadada ah, cid uun ayay guushu raacdaa. Markii saddexdaa xisbi ee kor ku xusani soo baxeen, ayay ururrada qaarkood sheegeen in aanay ku qancin natiijada, gaar ahaan Ururka Xaqsoor oo abaabulay mudaharaaddo xooggan oo uu kaga soo horjeedo natiijada iyo guud ahaanba xukumaadda. Waxa dhaawac iyo dhimashaba ka soo gaadhay dadkii shicibka ahaa ee taageerayay oo ay ciidamada nabadgelyada isku dhaceen.
Waxaa xusid mudan muddo ka dib aniga oo qaaday xaaskaygi oo foolanaysa oo aan geeyay dhakhtarka caanka ahaa ee Edna Hospital, waxaa la ii sheegay in ay ku jiraan dhakhtarka dhallinyaradii ku dhaawacantay mudaharaadkii arrimaha doorashada. Markii aan soo maray dhallinyaradii dhaawaca ahayd, saddex qof oo ugu darraa si aan madaxweynaha ugu gudbiyo oo loogu qorsheeyo dhakhtar debadeed, ayaa la ii sheegay in weerar abaabulan la igu soo qaaday oo dhakhtarka ay dad gadoodsani hortiisa igu sugayaan. Waan yaabay oo aniguna waxaan islahaa wax u qabo kuwa jilicsan. Masuuliyadda ayaa leh naftaada oo khatar kujirta in aad qaar kale noloshooda badbaadiso. Waxaan u diiday ciidamada booliska iyo ilaalidu in ay xoog ku soo galaan iyaga oo i badbaadinaya, balse waxaan ka soo baxay albaabka danbe. Iyaga oo halkii tuban dadkii gadoodsanaa ayaan dhaafay.
Kulankii Zanawi iyo Silanyo
Madaxweyne Silanyo ayaa safarkii labaad Dec 9, 2010 waxa uu ku tegay dalka Itoobiya, isla markaana waxaan ka mid ahaa weftigiisa. Waxa aannu safarkani ii ahaa farsad aan mar labaad hoggaamiye dal kula kulmo. In kasta oo aannu sidii madaxweynaha Djibouti, ra’iisal wasaaraha Itoobiya nagaga hor iman madaarka, haddana wuxuu noo soo diray ku-xigeenkiisii Xayle Marmaya—oo geeridiisii ka dib ka dhaxlay ra’iisal wasaarannimadii. Kaddibna waxa naloo gelbiyey qasriga dalka looga taliyo, halkaas oo uu nagu sugayey Males Zanawi.
Labadii Ra’iisal Wasaare ee u kala danbeeyay Ethiopia iyo Weftigii Somaliland
Males Zanawi waxaa ka muuqatay in uu ahaa hoggaamiye awood badan, maskax badan oo khabiir ku ah mandaqadda oo isu dhigay in uu yahay hoggaamiye gobol (Geeska iyo Bariga Afrika). Wuxuu si gaar uga war hayay duruufaha Somaliland iyo Soomaaliyaba isla markaana ay ka muuqatay hoggaamiye doonaya inuu saamayn siyaasadeed ku yeesho heer gobol , heer qaaradeed iyo heer caalamiba. Males Zanawi weftigii uu madaxweyne Silanyo hoggaaminayey wuu soo dhoweeyay oo na xogwaraystay. Wuxuu ahaa nin aad u deggan oo si qoto dheer u ogaa sida uu u hadlayo iyo waxa uu ka hadlayo, isla markaana hibo badan u lahaa helitaanka xubinta hadalka oo aanay sinnaba u seegaynin mawduuca uu markaa lafa gurayo.
Wuxuu nagala hadlay iskaashiga wejiyada badan leh ee u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya, waxa uu nala soo qaaday mawduucyo la xidhiidha mandaqadda Geeska Afrika iyo kuwa kale oo caalamka la xidhiidhaba. Males Zanawi berigaa si buuxda oo heer sare ah ayuu noo soo dhoweeyay weftigii madaxweynaha Somaliland ee aan ka mid ahaa. Marka laga tago sida uu Males Zanawi u ahaa nin wargaleen ah, xogtiisu dhammaystiran tahay isla markaana hayey xogo badan oo siyaasadeed. Wada hadalladii aannu Males Zanawi la yeelannay haddii aan qodobbeeyo, waxaan ka soo saari karaa saddex arrimood oo muhiim ah:
Shaqaaqadii Kililka Shanaad
Arrinta koowaad ee aannu Males Zanawi kala hadalnay waxay ahayd mushkilad iyo ismaandhaaf ka jirtay Kililka 5aad xilligaa, oo salka ku haysay isfaham xumo u dhexaysay maamulka Kililka 5aad iyo dadka isir ahaan Somaliland ku abtirsada, isla markaana ah muwaadiniin deggan xadka dhinaca Itoobiya, kana mid ah shucuubta iyo qowmiyadaha dalkaasi. Arrintani xukuumadda Somaliland dhawr jeer ayay uga cabatay Itoobiya, laakiin madaxweyne Silanyo wuxuu u dhigay hab dabacsan oo dublamaasiyadeed oo deganaansho iyo hubsiimoba ku jirtay. Wuxuu yidhi “Mudane raysal wasaare, ma doonayno in aannu dalkaaga faro-gelinno, balse waxa jirta cabasho isa soo taraysa oo ka jirta Kililka 5aad. Cabashadaasna marar badan ayay Somaliland dareenkeeda idiin soo gudbisay. Waxa jirta kala fogaansho iyo isfaham xumo u dhaxaysa maamulka Kililka 5aad iyo dadka isir ahaan Somaliland ku abtirsada, balse iyagu degaan ahaan iyo dad ahaanba ah muwaadiniin ka mid ah qaranka Itoobiya. Haddii aan mushkiladaa wax laga qabanna, waxa iman karaya iskudhac!”
Males Zanawi inta uu aad u qoslay ayuu kaftan kaga jawaab celiyay oo uu yidhi: “Madaxweyne, wixii Isaaq ah adigaa u taliya, wixii Ciise ahna Ismaaciil Cumar ayaa u taliya! Markaa ku soo dhowoow oo farta saar halka kuugu daran. Maxaa dhib ah ee jirta oo aan wax idin kala qabtaa?”
Erayadaa kaftanka ah ka dib, madashii la fadhiyey aad baa loo qoslay, waxayna u muuqatay in labada hoggaamiye ay si kaftan ah isugu xaalwarrameen oo isu qanciyeen! Wuxuu madaxweyne Silanyo tilmaamo ka bixiyey murankii ka jiray iyo dareen cabatin ah oo ku wajahan dawladda degaanka Soomaalida.
Ictiraaf ay Somaliland weydiisatay Itoobiya:
Arrinta labaad ee aannu kala hadalnay Males Zanawi waxay ahayd dhinaca ictiraafka, taas oo ay Somaliland weydiisatay in aqoonsato, kalana shaqayso aqoonsi-raadiska Somaliland ee gobolka. Ka dibna Males Zanawi wuxuu nagu yidhi: “Annagu dawladda labaad ee idin aqoonsata ayaannu noqonaynaa, laakiin ta koowaad noqon mayno!” Balse wuxuu hadalkiisa noo raaciyay oo uu yidhi: “Aqoonsi uun yaanay idinkaga dhegine, waxaad doonataan inaad heshaan waxa la yidhaahdo ‘de facto Status’. Hab madaxbannaan oo ay dunidu idiin aqoonsato oo idiin horseeda inaad dunida la macaamishaan oo jaranjarada dawladnimo, hadba midkii idiin munaasib ah fuula! Sida Taiwan oo kalana noqda dal iyo dawlad jirta oo la yaqaanno duniduna la macaamisho; balse aan weli haysanin aqoonsi buuxa.” Waxaannu hadalkiisa ku soo xidhay, “haddii sidaas aad samaysaan, Somaliland waxay dheefsan doontaa horumar ballaadhan iyo macaamil dublamaasiyadeed oo aad u durugsan.”
Waxa kale oo uu Melez yidhi. “Waxaan ballanqaadayaa inaan Somaliland kala shaqayn doono sidii ay Urur goboleedka IGAD ugu iman lahayd mar walba goobjoogannimo. Marka aad IGAD goobjoog ka noqotaan waxaydaan yeelanaynin cod; haseyeeshee waxay arrintaasi idiin saamaxaysaa in aragtida Somaliland iyo qaddiyaddeeda si joogto ah miiska ugu saartaan urur goboleedka mandaqadda ka jira.”
Meles Zenawi xigmaddii uu maalintaa noo sheegay waxa ku jiray haddii aan qaddiyadda gooni isu taagga Somaliland laga dhaadhicin urur goboleedka IGAD iyo dalalka kale ee Afrika, in Ictiraaf-raadisku aannu meel fog gaadhi doonin! Waxa kale oo Males Zanawi uu hoosta ka xarriiqay in qaddiyadda goobjoogannimada aannu isagu soo dhigi karin shirka IGAD maadaama ay Soomalidu eedaynayso, balse waxa u u yidhi: “Waxaad isku daydaan inaad madaxweynaha Jabuuti hindisahan ka dhaadhicisaan si uu miiska u soo saaro. Arrintaasi u hawlgala oo wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya ee shirka imanayana ka feejignaada in aannu idinka hor iman oo aannu idin diidin, iskuna daya inaad si uun u maaraysaan. Markaa Nairobi ka hawl-gala oo anigana codkayga, ka dawladda Koonfurta Suudaan iyo Uganda saddexdaasba igu halleeya. Haddii Suudaan iyo mid kale idin diidana mushkilad ma yeelanayso oo aqlabiyaddii waad haysaan.”
Horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha Somaliland
Kulankii aannu la yeelannay Meles Zenawi, arrinta saddexaad ee uu ka hadlay waxay ahayd xagga dhaqaalaha. Wuxuu nagala hadlay sifaha iyo qaabka loo horumarin karo kaabayaasha dhaqaalaha ee Somaliland oo run ahaantii u baahan mashaariic waaweyn. Waxa uu noo tilmaamay in cidda kaliya ee Somaliland arrintaasi wax kala qaban kartaa ay yihiin dalka China iyo dunida Carabta. Waxa uu na geliyay rejo iyo yididdiilo hor leh oo ku wajahan dalalka Carabta iyo China, wuxuuna noo sheegay haddii aannu taageero dhaqaale ka helno waddamadan, inay noo suurto gelin doonto dhisitaanka iyo qabyatirka adeegyada lagama maarmaanka u ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, sida waddooyinka, dekedaha iyo madaarrada diyaaradaha.
Males Zanawi wuxuu aad awoodda u saarayay China, waxa aannu yidhi: “Dawladda Shiinaha waxba ugama baahnin ee shirkadaha Shiinayska ah ayaynu heshiis saddex-geesood ah la galaynaa oo aynu odhanaynaa nala dhisa dekadda Berbera, nala dhisa waddada dheer ee isku xidha Berbera ilaa Wajaale, waliba jid tareen ah oo Itoobiya iyo Somaliland isku xidhana noo sameeya! Shidaalkaygan haatan laga qodayo Itoobiyana waxaynu shirkadahaa Shiinaha ka dalban doonnaa inay dhisaan dhuun ka qaadda shidaalka Itoobiya, oo geysa dekedda Berbera si halkaa looga sii dhoofiyo!” Males Zanawi wuxuu ka dhawaajiyay qaabka heshiiska saddex-geesood ah (Itoobiya, Somaliland iyo China). Laakiin, wuxuu si adag noogu yidhi: “Arrintaa idinku ha siyaasadaynina oo arrimaha siyaasadda saldhig ha uga dhigina. Xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga ha laga abbaaro! Haddii aad abuurtaan jawigii dunida iyo shirkadaha caalamka ku dhiirri gelinayey inay dalkiinna maalgashadaan, waxa hubaal ah in dunida oo dhami ay dalkiinna xiisayn doonto! Sidaa darteed, qorshaha noocan ah waxaynu ka dhiganaynaa foodsaar si aynu ugu gacanhaadinno shirkadahaa Shiinaha ah ee haatan sida gaarka ah u danaynaya inay qaaradda Afrika maalgashadaan!”
Intaa ka bacdi, isla kulankaa waxaa lagu go’aansaday in labada Wasiir arrimo dibadeed ee Itoobiya iyo Somaliland ay is raacaan oo ay China tagaan si ay ula kulmaan, is-afgaradna la sii gaadhaan shirkadihii Shiinaha ahaa ee la danaynayey. Sidoo kale labada wasiir waxa la rabay inay u sii gogol xaadhaan kulanka lagu sexeexi doono heshiiska saddex-geesoodka ah oo Males Zanawi laftiisu doonayay inuu soo duulo oo uu dalkiisa isagu u sexeexo! Arrintu si kastaba ha ahaatee, waxaan ka mid ahaa weftigii ka socday Somaliland ee dalka China booqashada ku tagay, halkaas oo aannu kulan kula yeelannay shirkad weyn oo Chinese ah. Balse kulankii midho-dhal muu noqon oo wuu naga dhicisoobay. Waxa aannu tuhunsanayn in Shirkaddii wax nala wadday uu cadaadis kaga yimi xagga dawladda China.
Waxa kale oo iyana jirtay in shirkaddii hawsha nala wadday iyo dawladda Itoobiya ay isku dhaceen, sidaan maqlay ugu dambayntiina waxaba dhacday in arrini noqotay in labada dhinac (Ethiopia iyo shirkaddii China) ay maxkamad isla galaan. Ugu dambayntiina qorshihii ballaadhnaa ee aannu wadnay halkaasuu ku burburay.
Kulankii Meles zanawi waxaa na xidhiidhinayay wasiirkiisa arrimaha debedda isla markaana ahaa ra’iisal wasaare xigeen, kaas oo dhimashadii Zanawi ka dib dhaxlay xilkii ra’iisal wasaare ee dalka Itoobiya. Laga soo bilaabo xilligaa waxaan marar kala duwan la kulmay ra’iisal wasaare Hayle Mariam oo aannaan isku cusbayn balse xilku ku cusbaa, wuxuu ahaa Hayle Mariam nin deggan, oo aan kibir lahayn, kaas oo nala wadaagay in uu dhammaystiri doono himiladii Zenawi ee horumarka dalkiisa. Muu ahayn nin sidii Zenawi u firfircoon ama u khibrad badan, balse wuxuu ahaa nin shaqadiisa uun ku eg annagana wixii shaqo ah nala wadaaga. Kamaan helin aragtiyo cusub ama dareen i soo jiita. Waxaan is leeyahay waa arrin iska macruuf ah in haddii ninka kaaga horreeya kursiga ee aad beddeshaa uu ahaa nin cabqari ah oo magac leh, badanaa masoo baxo magaca hoggaamiyuhu haddii aannu la iman wax cusub sidii Anwar Saadaad oo ahaa madaxweynihii dhaxlay Jamaal Cabdinaasir ee Masar, haddana dunida magac weyn kaga tegay. Sida taariikhdu weriso Anwar wuxuu ahaa nin iska miskiin ah xilligii Jamaal, balse wuxuu sameeyey tallaabooyin cusub oo dunida soo jeediyey. Waxaana ka mid ahaa in uu ka degay caasimadda Israa’iil, isagoo weliba dib u soo celiyay dhulkii ballaadhnaa ee xilligii Jamaal laga qabsaday.
La kulankii Shuyuukhda UAE
Kulankii Madaxweyne Silanyo iyo Sheekh Maxamed Sheekh Saayid. Marar dhawr ah ayaa madaxweynuhu la kulmay qaar ka mid ah Shuyuukhda Imaaraadka anigoo la socda. In kastoo aanan la kulmin Amiirka dalka (Sheekh Khalifa bin Zayed Al Nahyan), waxaannu la kulnnay Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan oo ah dhaxalsugaha Imaaraatka (ninka labaad ee dalka) iyo Sheekh Mansuur bin Zayed Al Nahyan oo ah wasiirka madaxtooyada ee Imaaraatka. Sidoo kale waxaannu la kulannay Sheekh Xamdaani bin Zayed Al Nahyan. Amiirrada Imaaraatka Carabtu waxay ahaayeen niman dhallinyaro ah oo aad mooddo inay si qoto dheer ugu milmeen qaabka fikirka iyo xadaaradda Dunida reer Galbeedka.
Sheekh Maansoor Sheekh Saa’id iyo Aniga, Abu Dabay.
Markii aan la kulmay waxaa iiga biniixay niman aan aad ugu soo jeedin wixii aan u soconnay oo ahaa gacan qabasho horumar oo ay wax weyn nagala qabtaan dhismaha dalka, balse waxaad moodaysay in quluubtoodu ay si weyn ugu jihaysan yihiin xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga. Waxay iila muuqdeen rag leh: “Annaga dhaqaalaa noo daran oo aannu u jeednaaye, maxaad haysataan oo aannu maalgelinnaa?!” Waxa iiga muuqatay niman xiisaynaya xagga dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgashiga. Dawlad ahaan waannu soo dhoweynay ciddii dalka maalgashanaysa oo iyadaba aan u baahnayn. Tusaale ahaan, waxay u muuqdeen niman aad u xiisaynaya shidaalka Somaliland oo doonaya in la siiyo block-yo ka mid ah dalka Somaliland si ay shidaal uga baadhaan.
Iyada oo Imaaraatka Carabtu ka mid yahay waddamada dunida safka hore kaga jira xagga soosaarista iyo dhoofinta shidaalka, haddana ma aannu fahmin sababta ay amiirradii aannu la kulannay ay u xiisanayaan shidaalka Somaliland! Arrintaasi waxay na galisay shaki. Waxa jirtay dhawr mashaariic ah oo iska koobnaa oo ay noogu ballanqaadeen, balse wax hagaagsani kama fulin.
Sidoo kale waxay noo ballanqaadeen dhismaha jidka u dhexeeya Berbera iyo Sheekh. Dhowr jeer baannu waraaqo u dirnay si aannu u xasuusino ballanqaadyadii ay sameeyeen, laakiin ballanqaadkoodii waxba kama fulin. Ka bacdina markii labaad baannu booqasho rasmi ah ku tagnay dalka Imaaraatka Carabta. Weftigana waxaa hoggaaminayey madaxweyne Silanyo. Xukuumadda Imaaraatka ayaana madaxweynaha u soo dirtay diyaarad khaas ah, waxaana na qaabbilay Sheekh Mansuur bin Zayed Al Nahyan oo ah wasiirka madaxtooyada ee Imaaraatka Carabta. Waxa aannu filaynay ama aannu is lahayn bal ballanqaadyadoodii doorkii hore wixii ka fulay aad dabagashaan oo ka xogwaraysta. Laakiin waxa noo muuqatay in nimankan amiirrada ahi ay hawshoodu badan tahay oo aanay xasuusan karin! Annagoo weli Sheekh Mansuur la fadhina ayuu madaxweynaha Somaliland su’aal dib u weydiiyey oo uu ku yidhi: “weligaa hore ma u timid dalkan Imaaraatka Carabta?” Layaab iyo amakaag! Hadda ninka su’aashaa na weydiinayaa waa ninkii diyaaradda noo soo diray ee mashaariicdana noogu ballanqaaday! Balse boqorrada hadal laguma celiyo.
Maadaama oo aannu filaynay in ay xagga maalgashiga xiisaynayaan, waxay soo bandhigeen in la siiyo Block shidaal ay ka baadhaan. Wasiirka macdanta iyo biyaha oo aad u xiisaynayay arrintaa ayay ka soo wada hadleen, waxaana loo soo bandhigay ugu danbayn madaxweynaha. Madaxweynuhu wuu saxeexay, balse arrintii may sii socon, oo wakhtigii loo qabtay wuxuu dhammaaday iyada oo aanay wax tallaabo ah laga qaadin, halkaas ayaannu isku taagay. Waxaan iyadana wax kooban ka xusayaa kulankii mid ka mid ah hoggaamiyaashii ugu da’da weynaa ee aan la kulmo waddamada Khaliijka. Weftigii madaxweynaha waxa lagu soo dhoweeyey habmaamuus aad u fiican ee madaxweynannimo, waxaa madaarka ku qaabbilay Sheekh Xamid oo ah inanka uu dhalay amiirku. Waxaana madaxweynaha loo dhigay roogga cas ee lagu maamuuso madaxda caalamka. Waxay ahayd 01, May 2011, waxaanan ka mid ahaa weftigii uu hoggaaminayay madaxweyne Silanyo oo la kulmay amiirka dalka Kuweyt, Sheekh Sabaax Al-Axmed Jabir Al- Sabaax. Booqashadani waxay ahayd mid aan rasmi ahayn, Amiirka Kuwait Sh Sabaax iyo Weftigii Maxdaxweyne Silanyo. La kulankayagii amiirka dalka Kuwait, waxa iiga muuqatay in amiirku ahaa nin waayeel ah oo haatan aakhirul cimri taagan. Laakiin, wuxuu ahaa nin Soomaalida jecel. Ma aha keliya dadka reer Somaliland balse guud ahaanba wuxuu ahaa nin isirka Soomaalida ah aad u jecel.
Amiirka dalka Kuwait wuxuu ahaa hoggaamiye in badan booqasho ku maray dhulka Soomaalida. Wuxuuna beero waaweyn iyo guryaba ku lahaan jiray Afgooye oo ah degaan xagga koonfureed kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo u jirta 30km. Sidoo kale, amiirku wuxuu xilliyadaa marar dhawr ah booqasho ku yimi Somaliland, oo wakhtiganna inankiisu deggen yahay, guryana uu ka dhistay magaalooyinka Sheekh iyo Berbera. Taasina waxay sii dhiirri galisay xiisaha uu amiirka Kuwait u hayo dalka Somaliland. Waxa kale oo iyana xusid gaar ah mudan, markii uu Saddam Xuseen dalka Kuwait qabsaday 02|08|1990 ka dibna uu af-gembiyey boqortooyadii Kuwiat, dadka asal ahaan ka soo jeeday Somaliland ee xilligaa ku noolaa dalka Kuwait waxay sumcad iyo karaamaba ku mutaysteen sidii geesinnimada lahayd ee ay dad badan oo reer Kuwait ah ula baxsadeen, una badbaadiyeen isla markaana ay uga samato-bixiyeen in dad badan oo reer Kuweyt ah ay u gacan galaan ciidamadii Saddam Hussein.
Markii aannu u tagnay amiirka, si kal iyo laab ah oo ay niyadsami ka muuqato ayuu noo qaabbilay, waxaana iiga muuqatay in amiirku uu Soomaalida niyad wanaag badan u hayo! Muddadii aannu booqashada ku joognay dalka Kuwait, in kasta oo aannu amiirka laftiisu nooga sheekayn, waxa naloo sheegay arrin ay saxaafadda dalkaasi ka qortay amiirka dalka, ka dib markii ay weydiiyeen, marka uu sariirtiisa tago ee uu seexanayo, halka ama meesha uu dunida ugu jecel yahay ee qalbigiisa ku soo dhacda. Su’aashaasi wuxuu amiirku kaga jawaabay “Soomaaliya ayaa qalbigayga ku soo dhacda!”
Halkaa waxaad ka dareemi kartaa in amiirku, dad ahaan iyo dal ahaanba, uu Soomaalida aad u jecel yahay. Sidoo kale, markii aannu amiirka la joognay, wuxuu noo sheegay inuu jecel yahay inuu Somaliland soo booqdo, wuxuuna naga codsaday in qasri looga dhiso. Arrintaasna madaxweynuhu wuu la waafaqay. Dhinaca kale, waxa muuqatay in amiirku uu waxoogaa ka gows-qabsaday amaba aannu jeclayn inuu fara gelin toos ah ku yeesho arrimaha siyaasadda ee u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya.
Amiirku wuxuu nagu ballamiyey hay’adaha khayriga ah iyo kuwa deeqaha bixiya ee dalka Kuwait. Wuxuuna noo ansixiyey lacag dhan 10,000,000 oo US Dollar oo ah lacagta lagu dayac-tiray madaarka Hargeysa iyo ka Berbera, lacagtaana waxa la soo mariyey hay’adda la yidhaahdo Kuwait Fund.
Hay’addan (Kuwait Fund) lafteeda ayaannu ka codsannay in ay naga caawiyaan wixii horumar ah. Laakiin way naga diideen inay Somaliland wax taageero dhaqaale siiso, marka laga yimaaddo qaadhaankii uu amiirku noogu soo dhiibay. Waxayna nagu yidhaahdeen lacag waannu ka buuxnaa, laakiin idinku Somaliland iyo Soomaaliya toona ma buuxinaysaan shuruudahayaga. Markaa iyagu albaabka way naga xidheen! Waxa kale oo na loo ballamiyey dalladda guud ee ay ku midoobeen hay’adaha khayriga ah ee dalka Kuwait. Waannu la kulannay, waxana aannu kala hadalay baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira Somaliland. Taageeradii iyo tabarrucii aannu ka helnay hay’adaha khayriga ah waxa ka mid ahaa dhismaha iyo qalabaynta xarunta casriga ah ee agoomaha ee ku taalla bariga Hargeysa, iyo waliba waxoogaa kale oo mucaawinooyin ah oo xagga bini-aadannimada ah.
Sidoo kale hay’adaha khayriga ah ee Kuwiat waxay maalgeliyeen aasaaska cisbitaalka la yidhaahdo International Hospital, oo ay ugu tala galeen in dakhliga halkaa ka soo baxa lagu maamulo oo lagu bixiyo kharashka xarunta agoomaha.
Dawladnimada iyo horumarka waxaa u saldhig ah nabadda. Nabadeyntii gobollada barigu waxay ahayd qorshe aad u fiican oo aan ka qeyb qaatay intii aan dawladda ku jiray. Waxay ka bilaabmaysay isla wakhtigii ugu horreeyay ee uu madaxweynuhu ku guulaystay talada waddanka. Waxay ka mid ahayd himiladii madaxweynaha in gobollada Bariga la nabadeeyo, si maamulka loogu fidiyo, loogana hirgeliyo adeegyada bulshada wixii suurto gal ah.
Waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay gogol nabadeed, waxaanay ku jirtay khudbaddiisii koowaad. Waxaan awoodda saarnay nabadayntii gobollada Bariga oo muhiim u ahayd qarannimada iyo jiritaanka Somaliland. Waxaan xasuustaa in xidhiidhada nabadayntu ay bilaabmeen iyadoo madaxweynuhu laba ilaa saddexdii bilood ee u horreeyay uu xilka hayay. Ka dibna waxa bilaabmay xidhiidhadii Buuhoodle oo uu joogay Saleebaan Xaglatoosiye oo markii danbe noqday wasiirka caafimaadka, oo xilligaas woxoogaa maleeshiyo ah oo SSC la yidhaahdo madax ugu ahaa Buuhoodle.
In kasta oo aannu xidhiidho kala duwan oo aan midho dhalin marar yeelannay, waxa xidhiidh fiican noo bilaabmay nin la yidhaahdo Garaad Ismaaciil Ciise oo ay Xaglatoosiye saaxiib ahaayeen. Waxa aannu soo mariyay xidhiidhkaas Guddoomiyahii Baarlamaanka Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro, isla markaana noo yimid oo noo sheegay xidhiidhka, ka dibna xidhiidh ayaannu la bilownay. Iyadoo arrintii meel wanaagsan marayso ayuu Saleebaan Xaglatoosiye sameeyay dibugurasho, oo xidhiidhkii ayuu joojiyay. Waxa uu ka shakiyay ayaa la igu yidhi xukuumaddii la dhisay oo hore waxba la iskaga ogayn, xaggayga qof aan weli waxba la isla qaadan dawlad laguma soo dari karayn. Wax yar ka dib rabshado iyo dilal ayaa ka dhacay degaanka Buuhoodle oo u dhexeeyey beelaha degaanka. Siddeed (7/1) ruux ayaa la kala dilay oo shaqaaqo dhex martay bulshadii degaanka wada degganayd, waxa dadkaasi la dilay ay u badnaayeen degaanka Qorilugud (7 xubnood). Waxay ahayd maalin ciid ah. Markaa waxa ka bilowday kacdoon.
Dawladdii oo aan wali xoogaysan oo cusub ayaannu aad uga werwernay dhacdadaa. Markaa madaxweynuhu waxa uu diray wefti nabadeed oo isugu jiray xukuumadda, golaha Guurtida iyo golaha Wakiilladda. Waxa kale oo jiray wefti kale oo salaadiin ah oo isugu jiray saddex madax, ciidamadiina markiiba waa loo diray si ay nabadda u sii ilaaliyaan. Ciidanka waxa la doonayay inay ilaaliyaan oo xakameeyaan dhinaca degeenka Qorilugud oo dhibtu ku dhacday. Waxaana ciidankii la dhigay degaanka Maygaagle.
Guddiyadii nabaddu wixii ay soo saareen la iskuma waafiqin. Ciidankii nabadda ilaalinayay ayay jidgooyo u galeen maleeyshiyaadkii SSC, waxaana yimi iskudhac, labada dhinacba waxyeelo ayaa kala gaadhay. Sida u caadada ah, jabhadaha ama ciidamada maleeshiyaadku waxaa daneeyaan xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa ciidan. Markaa maleeshiyadii maalintii xigtayna waxay soo qaadeen duullaan, waxaana qarxay dagaal lama filaan ah oo aannaan ka diyaargaroobin. Markay xaaladdu halkaas maraysay, waxa nagu adkaatay halka nabadda laga soo qabanayay oo nabaddii faraha ayay ka baxday. Hasayeeshee waxaa mawqifka xukuumaddu ahaa in nabad la raadiyo, laguna dedaalo in khasaaraha la yareeyo.
Iyadoo xabaddu dhacayso, ayaan xidhiidh la sameeyay Keyse Cabdi Yuusuf, oo ahaa xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta ee SSC si aan u damiyo colaadda. Waxaa igu soo xidhay nin la yidhaahdo Sallaal Ismaaciil Xulluulad oo ay saaxiib ahaayeen. Xidhiidhkii Keyse ka dib, waxaannu ku guulaysannay in aannu isaga iyo reerkoodiiba isfaham la samayno. Waxaan wergeliyey madaxweynaha halka ay noo marayso, waanu ila qaatay. Waxaannu qorshaynay in labo wasiir aannu u dirno degaanka uu markaa joogay ee Widhwidh; labada wasiir oo kala ahaa Maxamuud Xaashi iyo Cabdi Aw Daahir AHUN. Waxaana halkaa ka bilawday shir nabadeed Widhwidh ka dhacay. Waxa uu ku soo gebagaboobay in Keyse uu Hargeysa yimaaddo oo xil wasiirnimo (wasiiru-dawlaha nabadaynta gobollada bari) loo magacaabo, degaankiina waxoogaa wuu nabadoobay. Markaa haddana ciidanka qaranka oo xilligaasi aad ugu dhowaa Buuhoodle oo fadhiyay Sooljoogto, Hagoogane iyo Maygaagle ayaa aad looga cawday in ciidamadu ay joogaan meelihii biyaha lahaa oo dhan, isla markaana ay suurto-gal tahay inay isku dhacaan shacabka iyo ciidammadu.
Ka dibna waxa aannu qorshaynay in dib looga soo guuro, oo madaxweynihii wuxuu qaatay go’aan ah in ciidamada dib looga soo raro. Marka labaadna in maxaabiista loo sii daayo iyo in la aaso baraagihii shaqaaqadu ka dhacday. Tacab badan waxa aannu gelinney sidii xaraaradda colaadda loo dejin lahaa ee nabadda fursad loogu abuuri lahaa.
Waxaana abuurmay jawi nabadeed. Muddo ka dib ayaan xidhiidh la furay Xaglatoosiye. Muddo ayaannu xidhiidhaynay. Dhawr meelood ayaannu ku ballannay, nooma ay suurto gelin se. Garaad ayaa mar labaad xidhiidh dambe noo sameeyey. Markii muddo aannu wada hadlaynay ayuu mar dambe Jabuuti nagu ballansiiyay. Halkaas ayaannu ku kulannay Xaglatoosiye markii ugu horraysay, waxaana safarka igu wehelinayay Cabdilaahi Geeljire oo markaa ahaa wasiirka kaluumaysig. Haddana mar labaad waxaannu isku aragnay Dubai, waxaanan halkaas iskugu keenay madaxweyne Silanyo. Intaasi markii ay dhacday, wefti ayaannu ku soo dhoweynay Xaglatoosiye oo Buuhoodle ka yimid, waxaanan kaga hortagnay meel Caynaba agteeda ah. Waxa aannu ahayn wasiirka madaxtooyada, wasiirkii daakhiliga ee xilligaasi Maxamed Nuur Caraale “Duur”, wasiirkii maaliyadda ee wakhtigaa Cabdicasiis Samaale, guddoomiyaha UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, iyo ninka la yidhaahdo Garaad oo ahaa xidhiidhiyihii hawshan nabadeed oo kaalinta ugu weyn ka qaatay hirgelinteeda.
Xaglatoosiye iyo wefti odayaal ah oo uu hoggaaminayay waxaannu ku sugaynay meel u dhaw tuulada Yeyle la yidhaahdo 6 am Ilaa sagaalkii habeennimo ayay noo yimaaddeen. Burco ayaannu soo marinnay, ka dibna waxaannu u soo gudubnay Hargeysa oo madaxweynihii ayay ku kulmeen. Heshiis iyo muwaafaqo ayaa la gaadhay. Saleebaan Xaglatoosiye xukuumadda ayuu ka mid noqday, arrintii Buuhoodlana halkaas ayay ku degtay. Maamulkii khaatumo la baxay oo intii aannu Xaglatoosiye noo iman lagu sameeyey magaalada Taleex, waxaan xidhiidho la sameeyey oo aannu markii dambe ku guulaysannay Cabdiraxmaan Uurbayte oo ka mid ahaa raggii odayaasha ahaa ee dhaqaale ururinta iyo abaabulka dadka ka qeybqaadanayay oo Dubai joogay. Waxa aannu ugu yeedhnay Hargeysa waanu noogu yimi. Wada hadal iyo xidhiidh aannu la samaynay qaar ka mid ah odayadii reerka, ugu dambayntii waxaannu ku soo gebagabaynay heshiis nabadeed kaas oo Fiqifuliye ka dhacay, oo aannu ku qaramaynay 650 ka mid ah maleeshiyo beeleedkii ugu badnaa ee nabadda qaata oo watay 13 baabuur oo tikniko ah, waxaa wehelinayay Garaad Cabdillaahi iyo cuqaasha degaanka oo runtii nabaddii nala guntay.
Markii ay intaas oo tallaabo ahi ay noo suurto-galeen ayaa waxaa aannu barbar wadnay xidhiidho kale oo ahaa dhinaca madaxdhaqameedka ama garaaddada. Waxaan la xidhiidhay AHN Garaad Abshir oo inta uu Widhwidh yimid aannu la xidhiidhnay. Nooma ay hirgelin inuu noo tisqaado heshiis oo inta uu wax nala qaatay ayuu Puntland ku noqday. Ka dibna waxa aannu xidhiidh la samaynay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil, oo uu xidhiidhka noo waday wasiirkii hawlaha guud Cabdirisaaq Khaliif, ka dibna waxa aannu ugu tagnay Djibouti oo aannu kula kulannay kuna heshiinnay, ka dibna waanu isa soo raacnay. Si weyn ayaa loogu soo dhoweeyay garaadka magaalada Hargeysa.
Waxa kale oo aan wada hadal la furay Garaad Saleebaan oo isna ka mid ah isimada waaweyn ee bulshada reer Sool. Ugu dambayntii waxa aannu isla qaadannay in aannu kulan ku yeelano meesha la yidhaahdo Higlada ee ka shishaysa Gambadha, una dhow Tukaraq. Hargeysa ayaannu habeennimadiiba ka guuraynay oo aannu si qarsoodi ah uga baxnay waxaannu 7:30 subaxnimo kula kulannay meesha Higlada la yidhaahdo, aniga iyo wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xilligaa, Cali Siciid Raygal.
Waxaannu u tagnay garaadka iyo saddex caaqil oo kale. Waannu wada hadalnay is afgarad ayaannu yeelannay. Garaadku waxa uu nala qaatay muhiimadda ay leedahay in Taleex la tago oo la nabadeeyo. Wax yar ka dibna waxa wefti wasiirro iyo xildhibaanno isugu jiray oo aan hoggaaminayey ay markii ugu horreysay booqasho ku tageen magaalada taariikhiga ah ee Taleex. Waxaa jiray kulamo badan oo aan midhadhal samayn oo ay ka mid ahaayeen Cali Khaliif, Cali Ciise iyo rag badan oo qoorweyn ahaa. Nabad ayaa naas la nuugo leh. Siyaasiga guusha koowaad ee uu soo hooyaa waa nabad, waxaanay dhalisaa wadajir iyo isku duubnida bulshada. Soomaalidu waxay tidhaahdaa “rag gogashii waa nabad.”
La kulankii David Cameron iyo William Hague
Waxay ahayd 19 April 2013 markii aannu la kulannay ra’iisal wasaaraha dalka Ingiriiska, Mudane David Cameron. Kulankan oo ahaa mid xiiso badan oo lama filaanna ahaa. Laakiin inta aanan ka warramin dhacdadan, marka hore waxaan jecelahay in aan waxoogaa dib u milicsado oo aan ka faalloodo laba kulan oo ka horreeyey oo aannu la yeelannay xoghayihii arrimaha dibedda ee dawladda Ingiriiska ee xilligaa mudane William Hague.
4a. Kulankii William Hague ee Addis Abeba:
Kulankii ugu horreeyey ee aannu la yeelanno xoghayiha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Mr. William Hague wuxuu ka dhacay safaaradda Ingiriiska ee magaalada Addis Abeba. Mr. Hague si wacan ayuu noo qaabbilay oo noola sheekaystay. Waxaan jecelahay inaan xuso laba arrimood oo aad u xiisa badnaa (run ahaantii aniga xasuus igu reebay) oo aannu ka wada hadalnay, isaga laftiisuna uu su’aalo naga weydiiyey. Arrinta koowaad waxay ahayd xagga ictiraafka Somaliland. Maadaama ay dawladda Ingiriisku tahay dawlad Somaliland ay saaxiibbo ahaayeen, iyadoo horena u soo gumaysatay, waxaannu u arkaynay in iyadu tahay ta ugu dhow ee arrimaha ictiraafraadiska Somaliland wax kala qaban karta. Sidaa darteed waxaannu masuulkan kala hadlaynay in dawladda Ingiriisku ay naga badhi taaraan xagga arrimaha aqoonsi-raadiska. Arrinta labaad ee aannu xoghayihii arrimaha dibedda ee Ingiriiska kala hadalnayna waxay ahayd; bal horta ictiraafka aan gaadhnee, in dawladda Ingiriisku ay xagga kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ay naga taageerto oo ay naga dhisaan. Weliba waxaannu si gaar ah uga codsannay inay wax nagala qabtaan sidii ay Somaliland ula soo bixi lahayd khayraadka dabiiciga ah ee dalkeeda ceegaaga.
Intaa ka bacdi, William Hague labadii arrimood ee aannu u soo jeedinnayba su’aalo ayuu naga weydiiyey, isagoo ku horreeyey arrimaha ictiraafka. Wuxuu naga waydiiyay: “Haddii ay Somaliland ictiraaf hesho, ma caqabad buu ku noqonayaa mise xal buu u noqonayaa arrimaha murugsan ee dalka Soomaaliya? Idinka maxay idin la tahay?”
Dabadeed annaguna su’aashii uu na weydiiyey waxaannu uga jawaabnay sidii ay nala ahayd ee aannu u arkaynay in ay danta dalka iyo dadka Somaliland ku jirto. Waxaannu u sheegnay in ictiraaf ay Somaliland ka hesho beesha caalamka aannu marnaba caqabad ku noqon doonin arrimaha Soomaaliya, balse ay dhici karto inay xal u noqoto. Arrintu si kastaba ha ahaatee, kulankii aannu la yeelannay William Hague waxaa nooga baxday ama aannu dareennayba in dawladda Ingiriiska ee uu David Cameron gadhwadeenka ka ahaa ay aad u danaynayaan wadajirka dalkii la isku odhan jiray Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga Soomaaliyeed. Halkii aannu awal u haysannay ama aannu is lahayn dawladda Ingiriisku horseed bay ka noqon doontaa ictiraafraadiska Somaliland, waxaannu dareennay in aanay arrinta ictiraafka Somaliland doonayn in ay horseed ka noqoto.
Kulankaa aannu William Hague kula yeelanay Addis Abeba ka dib, dareenkii aannu ka qaadannay waxa sii xoojiyey ficiladii dambe ee dawladda Ingiriiska oo qabanqaabisay isla markaana marti galisay shirkii ka dhacay London 22|02|2012 ee ay Soomaalida u qabteen. Sidoo kale buunbuunintii ay dawladda Ingiriisku aad u buunbuunisay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud, waxay marag cad u tahay siday Ingiriisku u doonayaan wadajirka dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya. Arrinta labaad ee uu William Hague su’aalo naga weydiiyey waxay ahayd sidii ay Somaliland ula soo bixi lahayd khayraadka dabiiciga ah. Wuxuu nagu yidhi: “In dal walba uu khayraadkiisa dabiciiga ah la soo baxo faa’idaa ugu jirta waxayna u horseedi kartaa horumar laxaad leh oo ah xagga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba. Dhinaca kale, dunida khayraadka dabiiciga ah waa la isku dilaa oo waxa ka dhaca dagaallo iyo iskudhac badan gaar ahaan dawladaha curdinka ah ee aan weli adkaan, sidaa darteed soosaarista khayraadka dabiiciga ah (siiba shidaalka) waxay u baahan tahay taxaddir iyo ka fiirsasho qoto dheer.”
Kaddibna wuxuu na weydiiyey: “Haddii aad shidaalka la soo baxdaan, ma horumar buu idiin keenayaa, mise dib u dhac buu idinku keeni karaa? Maxay idin la tahay?” Markii shirkadihii shidaalka ka sahaminayey gobollada bari ee Somaliland ay reer waliba is hortaageen ee ay yidhaahdeen degaankayaga shidaal lagama qodi karo iyo dagaalkii South Sudan iyagoo madax-banaani helay shidaalna la soo baxay ayaa burbur hor lihi ka dhacay.
Waxaa aan dib u xasuustay hadalkii uu William Hague maalintaa nagu yidhi, dabadeedna waxaan u qiray waayo-aragnimada iyo khibradda uu ninkaasi u lahaa arrimaha caalamka!
4b. Kulankii William Hague ee N°10 Downing Street:
Kulankii Xoghayaha Arrimaha Dibada iyo weftigii Madaxweyne Silanyo
Markii aannu ka soo laabannay shirkii Ankara ee ay madaxweynayaasha Somaliland iyo Soomaaliya ku sexeexeen qodobbadii ka soo baxay wada hadalkii labada dhinac, ayaannu u soo duulnay London oo aannu mar labaad kula kulmi doonno William Hague. Kulankaasi wuxuu ka dhacay xafiiska ra’iisal wasaaraha Ingiriiska ee N°10 Downing Street. Run ahaantiina wuxuu ahaa kulan uu meeqaamkiisu aad u sarreeyo oo si weyn noo farxad galiyey.
Kulanku muu ahayn mid aannu hore u filaynay. Waxa na lagu keenay si qarsoodi ah. Waxana na lagu yidhi waxaad la kulmaysaan xoghayaha arimaha dibedda oo aannu is lahayn waxaad kula kulmi doontaan wasaaradda arrimaha dibedda oo u dhow xafiiska ra’iisal wasaaraha. Arrimaha uu William Hague rabay inuu nagala hadlo way iska caddaayeen oo hore ayaannu u ogayn. Waxa uu danaynayo in uu nagala hadlo in Somaliland ay ka soo qayb gasho shirkii labaad ee uu Ingiriisku u qabanayey Soomaaliya. Arrintan waxa hore noogala hadlay oo aannu ka diidnay labada safiir (Safiir iyo Safiir-xigeen) ee Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya iyo Addis Abeba. Mar Hargeysa ayay noogu yimaaddeen, mar kalana Addis Abeba ayaannu ku wada hadalnay, annagoo xukuumad ahaan iyo xisbiyada qarankaba u dhanna waannu ka diidnay fikirkii ay la socdeen.
Habeennimadiina waxay noo ballamiyeen wasiirka Ingiriiska u qaabbilsan arrimaha Afrika oo arrinta nagala hadlay, balse waannu ka diidnay. (Waxaan filayaa in cid naga mid ah ay dawladda Ingiriiska siinaysay war khaldan oo odhanaya Silanyo iyo weftigu way aqbalayaan in ay dhex fadhiistaan shirka Soomaaliya). Arrintu si kastaba ha ahaatee, markii aannu London nimi, annagu wefti ahaan waxa aannu filaynay in kulanka aannu la lahayn xoghayaha arrimaha dibedda uu ka dhici doono wasaaraddiisa, balse waxaa na loo duway xafiiska ra’iisal wasaaraha Ingiriiska ee Downing Street N°10.
Markaannu maraynay agagaarka West Minster-ka ayaa waxa farriin kooban noo soo diray xidhiidhiyaha xafiiska arrimaha dibedda ee u qaabbilsan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya, farriintaas oo uu ku ishaarayay in ra’iisal wasaarihii noo imanayo taas oo ahayd: “Mr. Cameron may drop in!” oo ah “Waxa laga yaabaa in ra’iisal wasaare Cameron uu fadhigiina ka soo dul dhaco.” Dabadeedna waxaa na lagu leexiyey xafiiska ra’iisal wasaaraha oo aannu ugu tagnay William Hague oo sii fadhiya oo ay hor taallo waraaqdii ay ku qornaayeen qodobbadii ka soo baxay wada hadalladii Ankara.
Mr. Hague markii aannu fadhiisannayba wuxuu bilaabay in uu na maqashiiyo hambalyo iyo bogaadin uu nagu hambalyeynayo qodobbadii ka soo baxay wada hadalkii Ankara. Waxa kale oo uu ka hadlay kulamadii ka dhacay Addis Abeba ee aannu la yeelannay safiirrada Ingiriiska iyo wasiirkiisa arrimaha Afrika.
Ugu dambayntiina wuxuu noo soo jeediyey in Somaliland ay ka soo qayb gasho shirka ay Soomaaliya u qabanayaan 7-da May 2013-ka. Laakiin madaxweyne Silanyo codsigaa uu soo jeediyey markiiba ganafka ayuu ku dhuftay, si cadna wuxuu u sheegay in aan Somaliland marnaba ka soo qayb geli doonin shirkaa uu Ingiriisku Soomaaliya u qabanayo!
Sidoo kale aniga iyo wasiirkii arrimaha dibeddu wixii hadal ah ee aannu madaxweynaha ku taageeri karaynay waannu ka dhiibannay ra’yigayaga, annagoo sheegnay sababaha aanay Somaliland shirkaa uga soo qayb galayn. Sidoo kale waxaannu durnay wejiga cusub ee siyaasadeed ee aannu xukuumadda Cameron ku tuhunsanayn.
Waxa kale oo aannu Mr. Hague dhegaha ugu ridnay hadal duurxul ahaa. Waxaannuna ku nidhi: “Dawladda Ingiriiska waxa dhowaan u dhashay ilmo (baby) cusub oo la yidhaahdo ‘Soomaaliya’ sidaa darteedna annaga (Somaliland) haatan dan nagama lihidin oo waad na illowdeen!!” Ka bacdina Mr. Hague wuxuu isku dayey inuu na dejiyo oo uu nagu beerlaxawsado in mawqifka iyo mustawaha ay dawladdiisu arrimaha Somaliland ka taagan tahay aanay haba yaraatee waxba iska beddelin, balse ay dawladdiisu haatan lagama maarmaan u aragto in dunidu wax ka qabato dhibaatada muddada dheer socotay ee ka taagan dalka Soomaaliya, iyadoo hadalkii socdo ayaa ra’iisal wasaarihii naga soo dul dhacay.
4c. Kulankii David Cameron ee N°10 Downing Street:
Kulankii Raysal Wasaaraha Ingriiiska iyo weftigii Madaxweyne Silanyo
Maalin Arbaca ah, 17-kii Abril 2013-kii, Waxay ahayd markii ugu horreysay taariikhda ee madaxweyne ka socda Somaliland uu la yeesho ra’iisal wasaare xukuma Boqortooyada Ingiriiska! Waxay ahayd dhacdo taariikh ku leh dalka Ingiriiska oo ahayd aaskii iyo baroordiiqdii Mrs. Margaret Thatcher, haweenaydii ugu horraysay (xagga dumarka) ee dalka Ingiriiska ra’iisal wasaare ka noqota.
Maalintaa iyada ah, waxay ahayd maalin xusuus gaar ah ku leh xisbiga iyo xukuumadda wakhtigaa ka talinayey dalka Ingiriiska. Waxaa aaskeedii loo dareeray Mrs.. Margaret Thatcher oo taariikh culus oo dhinacyo badan leh ku lahayd ummadda ku nool Boqortooyada Ingiriiska. Waxaa ka soo qayb galay aaskeeda qiyaastii madaxda ilaa 170 dal oo dunida ah, oo 23 ka mid ah ay madaxweynayaashoodii goobjoog ahaayeen, ayna marti u ahaayeen Ra’iisal Wasaaraha Boqortooyada Ingiriiska Mr. David Cameron. Halkaa waxaad ka garan kartaa sida uu ra’iisal wasaaraha Ingiriisku mashquulka u ahaa iyo inta uu leekaa waqtiga uu u heli karayey inuu ku qaabbilo cid ama madax kale oo aan aaska ka soo qayb galayn, balse iyagu dane kale u socda! Haddaba mudnaanta iyo ahmiyadda la siiyey in maalinta noocaasi ah lala kulmo madaxweyne Silaanyo iyo wefdigiisa, waa dhacdo xasuus gaar ah lehayd. Arrintu si kaastaba ha ahaatee, waxaa soo galay ra’iisal wasaaraha Ingiriiska, taas oo ahayd qorshe la sii diyaariyey. Jawigii kulanka iyo qaabkii uu hadalku u socday gebi ahaanba way is beddeleen.
Waayo David Cameron waa hoggaamiye safka hore kaga jira ragga waqtigaa xaadirka ah siyaasadda dunida hoggaamiya. Dabadeedna waxa hadalkii la wareegay David Cameron, waxana ka muuqatay isku kalsooni iyo isla weynaan aad u sarraysa, waxana aad moodaysay inuu ku talagalay ama uu is lahaa in hadal kasta, ama talo kasta iyo codsi kasta oo uu annaga noo soo jeediyo aannu siday tahay u qaadan doonno! ra’iisal wasaare Cameron isla markiiba wuxuu bilaabay in uu ka hadlo mawduucii isaga u darraa, wuxuuna madaxweyne Silanyo si toos ah ugu sheegay in isaga iyo xukuumaddiisuba ay doonayaan in Somaliland ay ka soo qayb gasho shirka 7-da May 2013 London lagu qabanayo si Soomaaliya loo caawiyo.
Waxa xusid mudan in shirka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la guddoominayey ra’iisal wasaare Cameron (Cochairing). Waxa kale oo uu madaxweynaha Somaliland u sheegay in wixii habmaamuus ah ama qabanqaabo diblomaasiyadeed ah ee Somaliland u qalma, ay xukuumaddiisu diyaarin doonto. Madaxweyne Silanyo codsigii David Cameron u soo jeediyey si weyn buu uga gaws-qabsaday, wuxuuna u sheegay in aanay arrintaasi suurto gal ahayn!
Intaa ka bacdi, ra’iisal wasaare Cameron wuxuu madaxweyne Silanyo ku yidhi hadal aanan hadda si wacan u wada xasuusan, balse ahaa hadal qariibsanayo oo uu nuxurkiisu ahaa: “Anigoo ka mid ah hoggaamiyeyaasha waaweyn ee dunida, Somalilandna uu naga dhexeeyo xidhiidh saaxiibtinnimo oo qoto dheer oo soojireen ah, ma waxaan dunida u sheegi karaa Somaliland waan keeni kari waayey!” Hadalkaa ka bacdi, waxaannu galnay xaalad xaraj ah oo aad u cakiran oo HAA iyo MAYA labadiiba ay nagu adkaadeen! Dabadeedna madaxweyne Silanyo aniga iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibedda (Maxamed Cabdilaahi Cumar) ayuu nagu soo jeestay oo uu nagu yidhi: “Waar maxaynu yeelnaa? Maxay idin la tahay?” Sida runta ah madaxweynuhu wuxuu galay mawqif xaraj ah, waxayna ahaayeen daqiiqado aannu galnay xaalad siyaasadeed oo aad u adag, dabadeedna waxa jawaabay wasiirkii arrimaha dibedda waxa aannu yidhi: “Madaxweyne, wallaahi arrintaasi way adag tahay!” Ka bacdina anigaa hadalkii qaatay waxaanan idhi: “Madaxweyne, maadaama ay tahay xaalad adag oo aynaan mawqif cad qaadan karin, waxay aniga ila tahay in aynu arrinta ku celinno gudaha dalka oo aynu wadatashi la yeelanno madaxweyne-xigeenkii, golaha wasiirrada, xisbiyada qaranka iyo golayaasha kale ee qaranka.” Arrintii aan soo jeediyey ayaa la qaatay.
Madaxweynuhu wuxuu ra’iisal wasaare Cameron ku yidhi arrinta waannu ka soo tashanaynaa. Mr. Cameron wuu arkay inay arrintu nagu adag tahay, wuuna naga aqbalay in aannu arrinka ka soo tashanno, balse ismuu odhan codsigaaga gebi ahaanba waa lagu diidayaa! Kulankii halkaasuu ku soo gebagaboobay. Markii aannu ku laabannay gurigii madaxweynaha ee London, waxa na dhex maray dood aad u adag oo ku saabsan arrintaa wixii laga yeeli lahaa iyo mawqifka ugu habboon ee aannu xukuumad ahaan qaadan karno. Waxa kale oo aannu la soo hadalnay dalka, waxa aannu wadatashi la yeelannay madaxweyna-ku-xigeenka, xubnaha golaha wasiirrada, labada gole qaran ee sharcidejinta iyo weliba xisbiyada qaranka. Sida runta ah, dadkii masuuliyiinta ahaa ee aannu la soo hadalnay way ku kala qaybsanaayeen xagga fikirka in Somaliland ay ka qayb gasho ama aanay ka qayb galin shirka 7-da May 2013 ka dhacaya London ee loo qabanayo Soomaaliya.
Habeenkii oo dhan ilaa saacadihii dambe arrinta waannu ka doodaynay oo aannu rogrogaynay. Dabadeedna waxaannu ku heshiinnay aynu kala hurdo tagno, berritana aynu halkaa ka sii wadno, gudaha dalkana aynu mar kale xogwaraysi ku celinno si aynu u gaadhno go’aan wadajir ah. Arrintu si kastaba ha ahaatee, in kastoo uu madaxweyne Axmed Silanyo talooyin, afkaar iyo aragtiyo badan urursaday (gudaha dalka iyo dibeddaba), haddana habeennimadii markii aannu kala hurdo tagnay madaxweynuhu wuxuu qaatay go’aan kama dambays ah oo qadhaadh.
Markaan salaaddii subax tukaday, ayuu madaxweynuhu goor hore iga soo garaacay telefoonkayga gacanta. Telefoonkii baan qabtay, saa waa madaxweynihii! Kaddibna wuxuu igu yidhi: “Adeer, waxaan qaatay go’aan adag, waxaanan doonayaa in aynu go’aankaygaa aad igu taageertaan! Waxaan qaatay go’aan ah in aan Somaliland shirkaa ka qayb gelin. Sidaas ayaana aynu ku hawlgalaynaa ee dadkii ka dhaadhiciya!” Dabadeed waxaan ku idhi: “Mudane madaxweyne, waannu kugu raacnay go’aanka aad gaadhay, waana aannu kugu barbar taagannahay!”
Dabadeedna madaxweyne Silanyo wuxuu ra’iisal wasaare David Cameron u qoray waraaq uu ugu sheegayo go’aanka iyo mawqifka ay Somaliland qaadatay. Waraaqdaa marka la soo koobo, madaxweynuhu wuxuu ra’iisal wasaaraha Ingiriiska ku yidhi ereyo nuxurkoodu ahaa sidan oo kale:
“Mudane Ra’iisal Wasaare; Anigoo si weyn kaaga mahad-celinaya qaabbilaadda iyo soodhaweynta sharafta leh, anigoo codsiga aad iga codsatay in Somaliland ka soo qayb gasho shirka 7-da May 2013 London loogu qabanayo Soomaaliya siinaya qaddarinta iyo ixtiraamka uu iga mudan yahay, haddana wax kasta oo magaca iyo karaamada ummaddayda wax u dhimaya, ama aan u adeegayn danaha siyaasadeed, kuwa dhaqaale iyo maslaxadda dalkayga iyo dadkayga, waxaan leeyahay MAYA. Jiritaanka iyo Qarannimada Somaliland waa mid ku timid rabitaanka ummadda Somaliland oo aan haba yaraatee cidina wax gor-gortan ah ka geli karin! Sidaa darteed, waxaan kula socodsiinayaa in Golaha Xukuumaddayda iyo Golayaasha kale ee Qaranka Somaliland aannu go’aan wada-jir ah ku gaadhnay inaan Somaliland ka qayb geli doonin shirka 7-da May 2013 ka dhacaya London ee loo qabanayo dalka Soomaaliya.”
Madaxweyne Silanyo oo ah hoggaamiye dal aanay weli dunidu aqoonsan, waxaan aaminsanahay inuu hadal taariikhi ah ku yidhi ra’iisal wasaaraha Boqortooyada Ingiriiska. Sidoo kale, in kasta oo go’aankaasi uu lahaa caqabadihiisa iyo mushkiladihiisa siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeedba, haddana madaxweyne Axmed Silanyo wuxuu qaatay go’aan taariikhi ah, kaddib markii uu go’aansaday inaan Somaliland ka qayb galin shirkii 7-da May 2013-kii xukuumadda Ingiriisku ay London ugu qabanaysay dalka Soomaaliya. Go’aankaa taarikhiga ah ka bacdi, maalintii xigtayba waxaannu u duulnay dalka Maraykanka.
Maadaama oo turunturrooyin badnaayeen, eedahu dawladda ku socdaa badnaa, qaylada siyaasaddu badnayd, duruufaha dawladda ku gadaamani badnaayeen, anigu aan joogay qasriga oo aan ahaa bartilmaameedka siyaabo badan mushkuladahaa ay nabarro iiga soo gaadhayeen oo aan u ahaa dhibbane, maalmahaa maalmaha ka mid ah oo aan ku hawlanaa wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya iyo arrintan shirka ee dawladda ingiriisku nagu casuuntay, ayay igu dhalatay in aan tix gabay ah ku cabbiro wakhtigaa iyo waayihii kala duwanaa, waxaanan curiyey oo aan ka tiriyey fagaarihii London ee aannu dadka kula hadlaynay:
Dabuubtiisa gabay waanigii daayay waayadan e
Markase lay dalbado ayaan sangaha ugu dullaalaaye
Dembi kuma unko ee kaygu waa dux iyo Iidaane
Aan daliisho waa taan murtida deeqsi ku ahaaye
Dacwad waxaan ka idhi dawladiyo doorka maanta ahe
Madaxweyne loo doortay oo daacadaw kacaye
Ilaahay ha daayee wanaag noogu daadihiye
Dilalka iyo colaadihii jiray ee dunida aafeeyay
Dadkii wada walaaluu ka dhigay ul iyo diirkeede
Distoorka iyo xeerkaan qoray diinta laga dheegay
Nin u daran, ninka u daacad ah iyo kii wax duminaaya
Danayste iyo waa ogyahay daacad kii wade
Waxse haatan loo daynayaa ways dugsanaysaaye
Dusha iyo korkuu naga jiraa daafac nooyahaye
Shidaal dihin markii uu islaam daawo kula qaatay
Ingiriiska diday feejigay naga dareemeene
Duco iyo amaan baan u diray derajadeediiye
Afartaa wax lays kuma daree deel ma ka higgaadshay
Dallaayad, iyo sidii Maxamed Nuur ma idin deeqsiiyey
Darwiishkii Cali iyo Salaam daramalkoodi dheh
Ma daliishay bayd gaabyaduu doc uga leexdaaye
Dacwadna waxan ka idhi eedihii laygu duur xulaye
In kastood xumaan uga digtoo waano kula daasho
Shaydaan wuxuu duufsadaa daabbad noqon waaye
Haddii shicibka deel-qaaf ka yimi lagama diireen
Dembiga madaxdi ii gaystaan deydayahayaaye
Dil baa aniga laygula kaftamay doobir xumadiiye
Dumar kama fekerin xaajadii dabaqu saarraaye
Dembi oogayaashii falaan diirad ku arkaaye
Anigaan dakanadayda maqan doonan kari waayin
Wax badan baan dul qaataye haddii layga damin waayey
Sida malabka doocaan haddii lay dudubinaayo
Doc aan uga wareegaba ficillo waysku deyayaaye
Deebaaq qadhaadh iyo anaa dacar magawsiine
Darandoori kay ugu dhacdow dan iyo xaasheeda
Dacwadna waxan ka idhi aniga iyo duun u hadalkayga
Dalka nin u shaqeeyiyo ninkii dawlad hannanaaya
Dulmiga iyo xumaatada ninkii doc uga baydhaaya
Dadka maantu waa neceb yihiin dunida joogaaye
Dabka kii hullaaqshay lib iyo derejo siiyaane
Dalqadaa wax lala doonayaa meel kalaw darane
Waxaan ahay darwiish heeganoo ay rag isla daaleen
Markay xaajo kala daadatee dacalo dheeraato
Ama ay daruuraha kortay daafta iman waydo
Waxaan ahay ninkii loo diro ee soo dawayn kara e
Dawliisha geela ee murkaha laga daboolaaayo
Dubjirkaan waaraabuhu cunin daan canjiidlaha e
Allaw yaa aflama daaliyee daacad ugu sheega.
Ma daliishay bayd gaabyaduu doc uga leexdaaye.
Dacwadna waxaan idhi qaranka iyo dawladnimadeena
Duug ma leh taariikhdu oo mustaqbalkaa lagu daliishaaye
Dorraad haddii aan jibbaysnaa oo aan shanti orod ku doonayney
Daluunta iyo godkii lagu ridaan daaya leeyahaye
Dantaa lamahuraan ahe, haddii ay dunidu noo yeedhay
Dacwigii la galay xaajadii doodda laga yeeshay
Dulucda wadahalku waxay daarranayd kii na loo diray
Dawlado walaal ah aan noqono iyo duul iskaashada
Dibindaabyadii hore, haddii aan dib uga faalloodo
Dagaalkii la galay halganka iyo diiftii naga gaadhay
Dulcad iyo Darroor maatadii ayda lagu daadshay
Diyaaradaha miigga ah markii lagu dabraynaayey
Dacallada Hargeysa iyo Burco, goobihii maydka lagu duugay
Dalkii wada dumay iyo daarihii madfaca lagu duqaynaayey
Duqayda iyo wadaadda markii aan cidi danaynaynin
Daacuflaha goblamay iyo hooyadii dugayda yeedhaysay
Shebbadihii ilmada duugayey ee kufsiga lagu dullaalaayey
Dakanihii la soo maray bulshada diilalyadii haysay
Dadkaygu haddu cafiyey dakharradii iyo doogtii wada gaadhay
Daliil uma aha nacasnimo iyo inay ay nabaradii dib u illaaween
Dardaaranka iga qaata caawaan dadyahow idin duljoogaaye
Daayin baa wax qaybshee hadduu wanaag doora ina siiyey
Degganaansho iyo nabadgelyo hadduu ina dabbaalsiiyey
Digasho iyo innaga oo aan ciilqab door ka dhiganaynin
Dareen wada jiriyo waxaan rabaa inaad dedaashaane
Dadkoo meel u wada jeesta qarankan oo daawo wada qaata
Dariiq qudha ah in ay wada martoo daacad ku ahaato
Dastuurka iyo sharciga madaxda oo laga danbaynaayo
Difaac loo dhan yahay ayaa cudud ah iyo dayr wax caabbiya.
Kordhinta xawaaraha iyo karaar qaadashada siyaasadda (Political Momentum) ee safarradii iyo kulamadii siyaasiyiinta, madax-dhaqameedka, culimada iyo Safarrada dalka gudihiisa. Shaqo kastaa waxay u baahataa kormeer, siyaasadduna mar kasta oo aad dareento hoos u dhac iyo dareenka bulshada oo aan kula jirin waxay u baahataa karaar qaadasho iyo labo kaclayn, sidaa darteed marka aan aragno in loo baahan yahay waxaannu abaabuli jiray kulamo gaargaar ah ama koox koox ah oo ku wajahan hadba meelaha aannu ka filayno in hoos u dhac ka jiro ee u baahan dareenka bulshada la soo jeediyo.
Hannaanka siyaasadda Soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay beelo, waxaana saldhig u ah dhaqanka, caadooyinka iyo diinta. Inta aannu iman hannaankan ka duwan iyo isbeddel bulsho oo saldhiggiisu yahay mabaadi’ iyo maslaxad, waxaa lagama maarmaan ah in aad tixgeliso xaqiiqada dhulka taalla ee wakhtigaa.
Iyada oo aan dunida kale looga baran booqashadu hoggaamiyahu guryaha ku booqdo dadkiisa, ashqaasta muuqaalka ku leh bulshadu oo aad booqataa waxay beddeli kartaa jawiga siyaasadda. Waxay ahayd bariido aan hore loo sii ogayn, madaxweyne Silanyo ayaa guriga ku booqday Maxamed Iskeerse oo ahaa xoghayihii maaliyadda ee xisbiga Kulmiye, kaas oo ay kala fogaadeen markii uu ka reebay xukuumaddii uu soo dhisay.
Markii madaxweynuhu guriga ugu soo galay cadhadii waxay isu beddeshay farxad, tabashadii waxay isu beddeshay mahadnaq, murugadii waxay isu beddeshay dareen wanaagsan iyo qiiro. Waxa aannu ku tiraabay hadal qalbiga ka soo go’ay oo ay wejigiisa ka muuqato farxadi: “Ma madaxweyne kale ayaa gurigayga iman lahaa! Waxaan ogaaday in aan leeyahay saaxiib. Waxaan ogaaday in aanan dhismihii Kulmiye ku khasaarin” Maalintaa wixii ka danbeeyay waxaa dib u samaysmay xidhiidh wanaagsan iyadoo madaxweynuhu xilli danbe oo uu xanuunsadayna uu ka bixiyey lacag dhan $50,000 taas oo ahayd kharashkii caafimaadka.
Wakhtiyo badan oo ay aloosnayd mucaaradad na lagaga soo horjeedo murugga siyaasadda iyo muranka dhinacyada siyaasadduna uu aad u sarreeyay, waxa aannu qabanqaabinay kulamo aannu ku qaabbilaynay dadyawgii wax tabanayay. Waxa aannu jaanis u siinnay in ay madaxweynaha u tebiyaan waxyaalaha ay tabanayaan iyo in la dhegaysto oo ay nala wadaagaan dareenkooda.
Waxaa jirtay maalin aannu la kulannay beel ka mid ah beelaha waaweyn ee Somaliland taas oo aad isu soo agaasintay cabasho ballaadhan soo bandhigtay, dabcan annaguna si laxaad leh ayaannu ugu diyaar garawnay oo u soo dhoweynay, una dhegaysanay iyada oo madaxweyanaha iyo wasiirradii aan ka midka ahaana aannu siinnay jawaabo waafiya. Waxaa goobta fadhiya odayaal, siyaasiyiin qoorweyn ah, xildhibaannada guurtida iyo wakiillada ee beesha. Markii dooddii cabbaar socotay ee labadii dhinac isu celiyeen waxaa abuur may is faham, dareenkii tabashaduna wuxuu isu beddelay hilow iyo isu soo dhawaansho. Xildhibaan Dhugad AHUN oo ahaa oday caan ahaa oo Guurtida ka tirsanaa ayaa hadal kaftan ah ku soo gebabebeeyay fadhigii, oo yidhi “Waar waa laynaga gar helay ee aan qaadanno. Madaxweyne adiguna gacanta kor u qaad”; isagoo uga jeeda madaxweyne deeqda/waxbixinta agow. Waxaa dhacday dhacdo naxdin badan oo la soo sheegay in saddex qof lagu dilay Seemaal oo Gabiley kaga beegan qiyaas ahaan 70km dhanka waqooyi. Shaqaaqadani waxay dhex martay laba degaan oo markii horeba utumo iyo dilal u dhexeeyeen. Markii qayladhaantu na soo gaadhay, ayaannu shir isugu nimi madaxweyaha, wasiirkii arrimaha gudaha iyo rag kale oo degaanka ka soo jeeday. Talo waxaa lagu soo gebagebeeyay in wefti loo diro, waxaana loo xulay rag aan ka mid ahaa. Waannu baxnay.
Isla markiiba qorraxdhicii baannu soo gaadhnay degaankii. Ciidamadii Ilaalada noola socday ayaan xagga danbe marinnay, si aanay isugu dhicin ciidan beeleedyada abaabulan. Waxaana xagga hore aannu soo marinnay gawaadhidii wasiirrada iyo odayaasha saarnaayeen, si aannu ugu muuqanno nabaddoon oo aan na loogu qaadan duullaan. Waxaa rasaas nagu bilaabay maleeshiyo ka soo jeedda degaannada dadku ka dhinteen, iyagoo na dul marinaya si aan isu taagno. Waannu istaagnay, oo gawaadhidii ka soo degnay xaggoodiina u lugaynay annagoo la hadlayna, una gacan haadinayna. Dabcan waxay ahayd khatar, laakiin waxaannu u arkaynay xal in aan sidan yeelno. Ninkii horjoogaha u ahaa oo la odhan jiray Marooro ayaa i gartay oo ku dhawaaqay Ma Xirsi baa? Waxaan u celiyay “Haa. Kan kalana waa Duur.” Intuu dib u jeestay ayuu la hadlay ciidamadiisii oo yidhi joojiya rasaasta. Waannu isa salaannay. Waxaannu waydiinnay halka maydadka lagu aasayo ee waayeelkiina joogo. Way naga hor baydheen, waanay noo tilmaameen meeshii aaska. Cishihii ayaan soo gaadhnay xabaashii. Dadkii wuu nagu naxay oo meesha na lagama filayn. Odayada iyo ehelladii ayaannu u tacsiyaynay oo la hadalnay. In kasta oo jawigu aad u qasnaa cunfi iyo colaadna laga dareemayay, haddana waxaa wax weyn beddelay imaatinkii madaxda, oo ay u dareemeen in dawladdu danaynayso.
Salaan iyo tacsi dabadeed, hadalkii ayaan bilaabay iyadoo wasiirradii kalana iiga danbeeyeen. Khaladka dhacay khalad kale ha kaga jawaabina oo ha u hiilinnina sida qofka xumi doonayo oo ah colaad laba beelood dhex marta. Waxaan idinka codsanaynaa in aan nabadda jaanis siisaan, oo inta aan hawshaa gelayno ee dembiilayaashii raadinayno aad na sugtaan. Odayadii si kooban oo kalsooni iyo dareen fiicani ku jiro waxay noogu jawaabeen hadal urursan: “Imisa cisho ayaannu idin siinnaa oo aad wax kaga qabanaysaan?” Waxaannu ku nidhi saddex maalmood. Waannu og nahay in aannaan saddex maalmood waxba ku qaban karin, laakiin waxa aannu doonaynay in cadhadu degto oo la helo wakhti aannu wax ku dejinno. Way nala oggolaadeed. Waxaana ka aslaaxay degaankii jawi nabadeed oo hana qaaday.
Xilliyada tartanka ururrada la furay oo doorashada ay ka qayb galeen ururradii cusbaa iyo xisbiyadii hore u jiray, waxaa soo baxay saddex xisbi waxaana dhacay afar urur. Sideedaba doorashooyinku waxay abuuraan xanaf iyo xurgufo siyaasadeed oo ka dhasha loollanka. Waxaa is biirsaday arrintaa iyo cabashada ururradii dhacay ka dib nagu yeelatay culays siyaasadeed ka dib markii mudaharaado ay sameeyeen qaar ka mid ah degaanka Hargeysa ay ku dhinteen dhawr qof dhawr kalena ay ku dhaawacmeen, arintani waxay nagu abuurtay jawi siyaasadeed qalafsan, sidii aan horeba u soo sheegay.
Habeen habeennada ka mid ah ayaan gurigiisa ku booqday si lama filaan ah hoggaamiyihii ururka Xaqsoor, Xasan Ciise, oo bud-dhig u ahaa kacdoonkaa siyaasadeed. Markii aan albaabka ku garaacay ee uu soo baxay ee uu i gartay ayuu qoslay oo ku kaftamay “Waxaa la ii sheegay Xirsi kollay meel ayuun buu kaaga soo dhacayaa,” isagoo cabbiraya dedaalkii aan waday ee dib ugu ururinayay odayaasha iyo waxgaradka degaanka. Wixii intaa ka danbeeyay wada hadal noo bilawday iyo heshiis ayay ku dhammaatay. Odhaah Soomaaliyeed ayaa tidhaahda “Aan wada hadalno waa aan heshiinno.” Ogow dhegaysigu waa maamulka badhkii, wadahadalkuna wuxuu ka mid yahay furayaasha siyaasadda.
Sida aan soo sheegay dhaqanku wuxuu ka mid yahay tiirarka siyaasadda Soomaalida. Iyadoo uu yahay jirridda bulsho ku fadhido, dhaqamadii wanaagsanaana ay wax badan oo fiican ina dhaxalsiiyeen, xaqiiqada dhulkan taallaa waxay tahay in dhaqamada iyo caadooyinku ay waxyaalo wanaagsan iyo waxyaalo xunba leeyihiin, oo mararka qaar adeegsiga dhinaca xun uu waxyeello u gaysto habsamisocodka siyaasadda, dawladnimada iyo maamul wanaagga. Abwaan Gaarriye oo 1991 arintaa ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi “Soomaalidu waa qabaa’il. Xoolo-daaqsato ayay ahayd, intii isku qolo ahiba waxay wadaagayeen daaq iyo biyo. Haddii mid la soo weeraro, kuwo tolkii ah ayaa u gurman jiray oo waa waxa lo odhan jiray yaa maali jirayeey. Caqliyaddii caynkaa ahayd oo halkeedaa ku shaqaynaysay ayaa markii gobonnimadi dhalatay ee dawladnimadii la ina siiyay aynu tii geela ku dabbaqnay.”
La kulankii Amiir Cabdiraxmaan bin Cabdulcasiis
Xilligaa aan la kulmay, Amiirkani muu haynin wax xil ah, laakiin waa nin ka tirsan dhaxal-sugeyaasha qoyska reer bin Cabdulcasiis ee ka taliya dalka Boqortooyada Sucuudiga. Amiir Cabdilraxmaan bin Cabdulcasiis waa nin waayeel ah oo aakhirul cimri taagan oo aanay iiga muuqanin awood badan oo uu ku tamariyo.
Ballantii aannu la lahayn ayaannu ka soo xaadirnay, goobtii ballantana waxa aannu nimi qiyaastii ilaa 9:30 ilaa 10:00 pm fiidnimo. Waqtigaa aannu goobta nimi, amiirku wuxuu ku jiray shir, oo malaha Sucuudiga habeenkii baa la soo jeedaa oo la shiraa! Wakhti badan baannu sugnay. Waxay nagu qaadatay in aannu amiirka sugno ilaa 01-02:00 am habeennimo, xilligaas oo uu amiirku shirkii ka soo baxay. Dabadeedna waxa loo sheegay in aannu weli fadhinno oo isaga sugayno! Waxyaabaha aad ii soo jiitay ee aan dhaqanka Carabta kaga yaabay waxaa ka mid ahaa ixtiraamka iyo karaamada ay martidu ku leedahay agtooda! amiirku markii loo sheegay in aannu sugayno, ayuu yidhi: “Ha u yeedhina ee anigaa halka ay fadhiyaan ugu tagaya.” Taas oo ka ahayd xurmo iyo ixtiraam uu annaga noo muujinayey. Waxa nagu soo laabtay ninkii amiirka gacanyaraha u ahaa, ka dibna wuxuu nagu yidhi: “Amiirkii wuxuu go’aansaday inuu idinka halkan aad fadhidaan idiinku yimaaddo!”
Dabadeedna waxa noo soo galay amiirkii oo luudaya oo garbaha la hayo! Waannu u istaagnay oo si wacan u salaannay, kaddibna wuu nala fadhiistay. Wuxuuna noo galay sheeko dheer oo uu kaga hadlayey Somaliland, reer Woqooyiga iyo dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya iyo taariikho hore. Waxa kale oo uu ka hadlay xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa nabadgelyo ee ka taagan mandaqadda Geeska Afrika. Amiirku wuxuu ahaa nin aad u furfuran, oo si saraaxad leh ayuu noo waraystay. Waxa kale oo uu naga waraystay xoolaha (sida geela iyo adhiga) ay Soomaalidu dhaqato, oo waxaaban ka yaabay sida uu amiirku ugu abtirinayo ee uu u kala dhigdhigayo geela iyo adhiga! Gaar ahaan wuxuu aad ugu dheeraaday sheekada geela, oo dhaqan ahaan ay Carabtu aad u jeceshahay oo ay ku dhaadato! Ka bacdina annagaa hadalkii la wareegnay, waxaanannu Amiirka guud ahaanba uga warrannay dalka iyo dadka Somaliland iyo ujeeddada ay booqashadayadu xambaarsan tahay.
Gaar ahaan, waxa aannu carrabka ku adkaynay oo aannu amiirka kala hadalnay qaddiyadda ictiraaf raadiska Somaliland. Sidoo kale waxaannu kala hadalnay in uu nagala hawl galo sidii uu madaxweynaha Somaliland booqasho rasmi ah ugu iman lahaa dalkan Sucuudiga si uu ula kulmo hoggaanka sare iyo madaxda Boqortooyada Sucuudiga. Waxa kale oo aannu kala hadalnay bal sidii baasaaboorka Somaliland loogu soo geli lahaa Sucuudiga. Amiirku, arrinta la xidhiidha baasaaboorka Somaliland wuu soo dhoweeyay, wuxuuna nagu yidhi ii keena koobbiyo ka mid ah baasaaboorkiina si aan xukuumadda Sucuudiga ugu gudbiyo oo aan ugala hadlo. Waxa kale oo uu noo sheegay inuu jecel yahay in uu Somaliland booqasho ku yimaaddo ee suurto-gal ma tahay? Annaguna waxaannu u sheegnay in aannu booqashada amiirka ku faraxsannahay oo aannu soo dhoweyn doonno.
Marka la isu soo minguuriyo, kulankii aan la yeeshay amiir Cabdiraxmaan bin Cabdulcasiis, waxa iiga baxay inay jirto kala-war-hayn-la’aan iyo is-moogganaan weyn oo dhex taalla Somaliland iyo dalka Sucuudiga. Waxa kale oo iyana jirta in dalka Boqortooyada Sucuudigu siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaanba uu qaatay mawqif ah in uu la shaqeeyo xukuumadda ka dhisan Xamar ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, waxa ii muuqata in Somaliland lafteedu ay la iman karto qorshe siyaasadeed iyo xidhiidh iskaashi oo ku wajahan la macaamilka Dunida Carabta. Iyadoo aan mudnaanta la siinayn xagga arrimaha siyaasadda ama aan Carabta la weydiisanayn inay Somaliland aqoonsadaan, ayaa waxa muhimadda koowaad la siin karaa xagga iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga, maalgashiga iyo horumarinta arrimaha bulshada. Haddaba, haddii tallaabadan la qaado, waxa abuurmi kara fursado cusub oo ay Somaliland ku fahanto nidaamka madax-salaaxa ah iyo Alle cimrigaaga dheeree ee Dunida Carabta lagula macaamilo!
Waxa xusid mudan in ummadda reer Somaliland ay taariikh aad u fac weyn oo soojireen ah (mid dhaqan iyo tu dhaqaalaba) la lahaan jireen Boqortooyada Sucuudiga, Yemen, UAE, Masar iyo dalalka kale ee Khaliijka Carabtaba. Marka laga hadlayo dadka afka Soomaalida, degmo kasta iyo dal kasta oo ay ku nool yihiinba, ummadda reer Somaliland ayaa ahaa Soomaalidii ugu horraysay ee Dunida Carabta u dhoofta, degta, ku noolaata, ka shaqaysata, ku taranta ee qaadata baasaaboorrada dalka Sucuudiga iyo waddamada kale ee khaliijkaba. Ilaa iyo waqtigan xaadirka ahna waxa jira kumanaan iyo kumanaan muwaadiniin asal ahaan reer Somaliland ah oo iyagu, ama aabbayaashood ama awowyaashood ku dhasheen dalka Sucuudiga iyo waddamada kale ee khaliijka, sida Imaaraatka Carabta iyo Qadar.
Haddaba, iyadoo laga faa’idaysanayo aqoonta, waayo-aragnimada, kartida iyo awoodda bulsho ee ku duugan ummadda reer Somaliland ee ku nool waddamada Carabta, waxaan is leeyahay waa lagama maarmaan in Somaliland ay la timaaddo qorshe iyo weji siyaasadeed oo furfuran oo ka duwan kii ay Somaliland hore ugula dhaqmi jirtay Dunida Carabta.
La kulankii Madaxweyniha Turkey Erdogan.
Waxa aannu iyagana kulamo kala duwan la yeelannay hoggaamiyaha dalka Turkiga Reciept Dayib Erdogan iyo raysal wasaarihiisii Axmed Daud Augle oo markaa ahaa wasiirka khaarijiga. Waxay nagu qaabbileen hab maamuus aad u sarreeya iyo dareen fiican oo qalbi samaan badan leh. Kulamadii aannu yeelannay waxay ku bilaabmeen arrimaha wadahadallada. Waxay ahaayeen qaar ay mudnaan weyn siinayeen. Waxay annaga iyo dawladda Soomaaliya noola macaamilayeen si siman oo caddaalad ah, haddii ay tahay guryaha ay na dejinayeen iyo gaadiidka ay nagu qaadayeen, iyo guud ahaanba macaamilka dublamaasiyadeed inta aanu ku jirno wadahadallada, wax faro gelin ahna na gumay sameyn jirin, in kasta oo ay midnimo aaminsanaayeen.
Waxaannu sidoo kale kala hadalnay arrimaaha horumarka in ay naga gacan qabtaan, annagoo ku casuunnay madaxweyne Erdogan iyo raysal wasaare Augle labaduba in ay dalka yimaaddaan, oo weliba uu ballanqaaday in uu Somaliland imanayo Augle markii uu wasiirka arrimaha dibadda ahaa. Iyaga oo nooga ballan qaaday in ay mashaariic horumarna ka samayn doonaan Somaliland, isla markaana ay jireen mashaariic uu ka mid ahaa dhakhtarka weyn ee Hargeysa oo ay dhagax dhigeen, balse wax waaweyn oo la taaban karaa kama fulin arrimahaa, mana jirin sabab hakisay oo aan ogaa.
Waxay u muuqdeen dad ku tashaday in ay dalkooda horumariyaan. Wuxuu noo sheegay xilligaa in uu marayo halbeegga dhaqaalaha ee lagu qiyaaso Tacabka Waxsoosaarka Maxalliga ahi (GDP) 12 000 oo Liire, halka uu markii ay dalka taladiisa la wareegeen marayay 3000 oo Liire. waxaanay higsanayaa in 2020 ay gaadhaan ilaa 30,000 oo Liire.
Guud ahaan, dalka Turkigu waa dal iyo ummad qadiim oo taariikh ku leh dunida, waxaana muuqata in ay horumar sameeyeen iyaga oo aan wax khayraad ah lahayn. Sidoo kale waxaa ka muuqatay in ay qaateen nidaamka dimuquraaddiyadda ee talada lagu yimaaddo doorashada. Wax kastaa waxay ku qoran yihiin Afka Turkiga, qof kastaana wuxuu ku hadlayaa Af Turkiga oo ma hawl yara in aad is fahamtaan.
La kulankii Madaxweynaha Koonfurta Suudaan
Weftigii Madaxweynaha Somaliland iyo South Sudan
Waxa aannu ka qayb galnay caleemasaarkii madaxbannaanida dalka Koonfurta Suudaan, maadaama oo ay dabeecadda siyaasadda ee dalkaa dhalanayay iyo dalkaygu ay isu-ekaansho ka dhexaysay. Waxaanay noo lahayd muhiimad weyn dadka Somaliland iyo dawladdaba. Waxa aannu uga qayb galnay si mug leh, iyaguna waxay noo soo dhoweeyeen si aad u wanaagsan. Waxa aannu jaanis u helnay in aan la kulanno madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo ku xigeenkiisa, waxaana ay noo ballanqaadeen xidhiidh wanaagsan iyo isgarabsi. Balse cagaba iskumay taagin oo dhalashadii waxa weheliyay dagaallo sokeeyo oo ka qarxa iyo khilaaf siyaasadeed oo naafeeyay.
La Kulankii Madaxweyne Michael D. Higgins
Kulamadii ugu milgaha iyo karaamada badnaa ayuu ka mid ahaa booqashadii wefdigii aan ka midka ahaa ay ku tageen waddanka Ireland. Waxaa si diirran noo soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaa, Mr. Michael D. Higgins. Wuxuu madaxweyanahayagii iyo weftigisii ku qaabbilay madaxtooyada. Waxaa kale oo nooga qabsoomay kulamo aannu la yeelannay hay’addaha kala duwan, meelaha taariikhiga ah iyo machadka khilaafaadka ee dalkaasi.
Madaxweynaha dalka Irland iyo Madaxweyne Silanyo.
Dadka Irish-ku waa meesha madaxda Maraykan iyo in badan oo ka mid ah dadweyanaha Maraykan ay ka soo jeedaan. Waxaa iiga muuqday dalkani inuu door fiican oo siyaasadeed iyo dublamaasiyadeed ka ciyaaro dalalka ku midoobay Europe, UK iyo dalweynaha Maraykan oo ay in badan oo shirkadaha waaweyn ka mid ah ay ku leeyihiin xarumo waaweyn. Sida oo kalana Somaliland waxay noqon kartaa isku xidhaha (Hub) Geeska Africa, Khaliijka Carabta iyo wadamada waaweyn ee danaynaya marinka Badda Cas iyo dhulka macdanta/udugga ee Somaliland.
Tags: Kulamo Madaxeed aan Qayb Ka Ahaa
Next post Shirka Golaha Wasiirrada
Previous post Wasiirkii Madaxtooyada ee Maamulka Somaliland